ကိုပေါက်ရဲ့မှတ်စုလေးများ..: March 2010
အခုတစ်လော နားရည်ဝ ကြားကြားနေတဲ့ ဒီခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ဘန်းစကား ကျူ ( Q ) တယ် တို့ လန်းတယ် တို့ လန်ထွက်နေတယ် ဇယားလေးတွေ ဆိုတာ လဒူပေါက်ကျိုင်း ဘာကို ညွှန်းဆိုတာလဲ ဆိုတာ တွေးတောရင်း ရေးရေးတော့ သဘောပေါက် သလိုတော့ အရှိသားဗျ… Q တယ် ဆိုတာ အူတူတူလဒူပေါက်ကျိုင်း ခမျှာမှာ တုံးရှာလို့ စာနဲ့ ရေးမပြတတ်ပေမဲ့ တဖက်သားကို သိအောင် ကျအောင် ပြောဆိုနေထိုင် ပြုမူတယ် ဆိုတာကိုအကြမ်းဖြည်း သိရသဗျာ..။
ဇယား ဆိုတာက ချာတိတ်တွေ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ ရည်းစား အတွဲ ဆိုတာတော့ အရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း သိမိသဗျာ.. နောက်ပြီး .. “အင်း..အဲ….ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် ဒီလိုဘဲပေါ့နော် .. ဟိုလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်.. အ..ဟင်း..ဟင်း….”
ငတုံးပေါက်ကျိုင်း ဒီ့ထက်ညဏ်မမီ တော့လို့ ဆရာသမား ကိုပီတာ ၊ ကိုဘကြိုင် တို့ကို တိုးတိုးလက်ကုတ်ပြီး မေး သင်သင်ဦးမှ ….။
လန်းတယ် တို့ လန်ထွက်နေတယ် တို့ ကတော့ ပေါက်ကျိုင်း လွန်ခဲ့ တဲ့ ဘာလင်တိုင်းဒေး တုန်းက ဒီ မလေးရှား ကို မြန်မာပြည်က အဆိုတော်မလေး တွေဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ၊ Lဆိုင်းဇီ ၊ Nကိုင်ရာ ၊ ချစ်သုဝေ ၊ ရှင်ဖုန်း ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၊ မယ်လိုဒီ ၊ ဂျင်းနီ တို့ရဲ့ 8 lady show ပွဲမှာ မြင်ကြားရပြီး ရေးတေးတေး လေးတော့ သဘောပေါက်မိသဗျ.. အဲဒီပွဲကို ပေါက်ကျိုင်း ဒီနိုင်ငံသားတစ်ဦးရဲ့ ကောင်းမူ့ကြောင့် ဖရီး ကြည့်လိုက်ရပါတယ်..။
အဲဒီပွဲကို နိုင်ငံသားသူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ရှိုးကျကျဝတ် မျက်မှန်အမဲကြီးတတ် ( အမှန်တော့ ခမျှာလေးတွေ ကို မျက်လုံးကျွတ်ကျ အောင် အားပေးတတ်တဲ့ ပေါက်ကျိုင်းသောက်ကျင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိလို့ ဘေးလူ ချာတိတ်တွေ မသိအောင် ဖုံးဖိ ထားရ သပေါ့လေ ) ခါးပတ်အိတ်ကြီးကို တစ်စောင်းပတ် ကိုယ်ကိုကိုယ် ဟောင်ကောင်မင်းသား ရှောင်ယွန်ဖတ် စတိုင်ဖမ်းပြီး ဆောင့်ကြွားဆောင့်ကြွားနဲ့ ရှိုးခန်းမထဲဝင်လိုက်တာ လက်မှတ်စစ်တွေ ဘေးမှာချထားတဲ့ ထိုင်ခုံကို မမြင်မကန်း ခလုပ်တိုက်မိပြီး လူကြားထဲ ဟတ်ထိုးလဲကျ သောက်ရှက်ကွဲမလိုဖြစ်မိသေး… အ ဟေး ဟေး..။
အဲဒီမှာ အခုခေတ်လူငယ်ချာတိတ်လေးတွေ ရဲ့ အလန်းလေးတွေ လန်ထွက်တာတွေ သူတို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံ အမူအရာတွေကို ကြည့်ပြီး ဆက်စပ်တွေး ပုံဖေါ်ယူမိတာပါ.. မလေးရှား ကိုကိုရွှေ တွေ ခမျှာ သူတို့ချစ်တဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်အဆိုတော်ချောမလေးတွေလဲ ဖြစ်ပြန် နှစ်သစ်ကူးပိတ်အလုပ်ပိတ်ရက်လဲ ဖြစ် ပွဲကလဲငတ် ဆိုတော့ကာ အားပေးလိုက်ကြတာ ခန်းမလုံးပြည့်ဘဲဗျို့..
စင်ပေါ်က အချစ်တော် မမလေးတို့ ကလဲ တစ်ဗိုလ်တက် တစ်ဗိုလ်ဆင်း.. အဲလေ တစ်ယောက်ဝင် တစ်ယောက်ထွက် ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်အမျိုးမျိုး အသံ ဟန်မူရာကောင်းကောင်း နဲ့ ဆိုကနေကြတော့ အောက်က ကိုကိုရွှေ ကာလသားတွေ ကလဲ တစ်ဟေးဟေးနဲ့ လက်သီးလက်မောင်းတန်း ၊ လက်ဝှေ့ရမ်း ၊ သူတို့ရဲ့ချွေးနဲစာလေးတွေ ဆုငွေပေး နဲ့ အားပေးလိုက်ကြတာ ခန်းမတစ်ခုလုံး အုံးအုံးထ ခင်ဗျ..။
ပေါက်ကျိုင်းမလဲ သူငယ်ချင်း နဲ့ ကိုကိုကာလသားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးအစွန်မှာ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဟန်မူရာအသံကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းဆိုနေတာ ကို တစ်မော့မော့နဲ့ အရသာခံနေတုန်း .. ပေါက်ကျိုင်း ဘေးမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာ နဲ့ တီရှပ်ကို စတိုင်ကျကျ ဝတ်ထားတဲ့ အသားဖြူဖြူ ချာတိတ်တစ်ယောက် ရယ် အိပ်ကပ်တွေအများကြီးပါတဲ့ သရီးကွာတား ဘောင်းဘီအနီရဲရဲကြီး နဲ့ ဝေါ့ကင်းရှူး အဝါရောင် ကို ကို့ယို့ကားယား ဝတ်ထား တဲ့ အသားညိုညို ချာတိတ် တို့ နှစ်ယောက်သား အူယားဖားယား လူတွေကိုတိုးဖြဲပြီး ဝင်လာပါတယ်ခင်ဗျ.. ပေါက်ကျိုင်း အထင် ဒီပွဲကို နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတယ်ထင်ပါတယ်..။
လူတွေကလဲ ခန်းလုံးပြည့်နီးပါးဖြစ်ပြန် တစ်အုံးအုံးတစ်လှုပ်လှုပ် နဲ့ ဆိုတော့ကာ ခမျှာနှစ်ယောက်သား လူတွေထဲ အတင်းဖြဲဝင် ခြေဖျားထောက်ကြည့်လဲ မရ တော့ ပေါက်ကျိုင်းဆီ တိုးဖြဲဝင်လာပါရော… ပေါက်ကျိုင်းမလဲ သူတို့ အတင်းတိုးဖြဲ ဝင်လာလို့ ဒီကောင်လေးတွေက ဘာလဲဟ ဆိုပြီး ရှောင်ယွန်ပေါက် စတိုင် နဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ခမျှာ ရှိုးတို့ရှမ်းတန့် ဖြစ်သွားသဗျား.. ပြီးတော့ မလေးလို ဆောရီး အဘန်း ( ဆောရီး အကို ) လုပ်နေသေး.. အင်း … လဒူပေါက်ကျိုင်း ပုံစံ က မျက်မှန်နဲ့ ဘာနဲ့ ဆိုတော့ ဘာကလို တိုတိုကိုး…..။
ဒီမတော့ ပေါက်ကျိုင်းလဲ အဆိုတော် မမလေးတွေကို အရမ်းမြင်ချင်တဲ့ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ကာ သနားပြီး ပေါက်ကျိုင်း ကိုယ်ကိုနောက်ရို့ ရှေ့ကွက်လပ်ကလေးထဲကို ဖိုးကြည့်ချင် နှစ်ကောင် ကိုဆွဲသွင်း လိုက်တော့ ခမျှာနှစ်ကောင် စင်ပေါ်က မမလေးတွေကို မြင်မှ ရှေ့တစ်ကောင် ပုခုံးကိုကိုင်ပြီး တဟေးဟေး နဲ့ ခုန်ဆွခုန်ဆွ နဲ့ အူရွှင် နေကြ သဗျ.. ။
စင်ပေါ်ကလဲ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ပြီး တော့ ရှင်ဖုန်း အလှည့် .. ပြီး…. ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း တက်လာတော့ အရင်ကထက် ပိုပြီး တစ်အုံးအုံးနဲ့ဖြစ်လာပါရော .. ဒီ မချော ပဲများများနဲ့ ဟန်လုပ်နေတာ ကို အောက်က ကိုကိုရွှေ ကာလသား တွေကလဲ အော်ကြ ဟစ်ကြနဲ့ ဆုငွေတက်ပေးကြနဲ့ အတိုင်အဖေါက် ညီနေတုန်း.. ပေါက်ကျိုင်း ရှေ့က စတိုင်ကျကျ ဝတ်ထားတဲ့ချာတိတ်နဲ့ အနောက်ကနေ ပုခုံးကိုင်ထားတဲ့ သရီးကွာတားကိုးကို့ကားယား ချာတိတ်နှစ်ကောင် ပြောနေတာတွေကို အတိုင်းသားကြားရသဗျို့. .. ။
“ ဟာ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း .. ဝိုင်းစု.. ဝိုင်းစု.. ရေလည် လန်းတယ်ကွာ.. လန်ထွက်နေတယ်… ”
အနောက်က အသားညိုညိုနဲ့ ချာတိတ်က..
“ ဟင်.. ဘယ်… ဘယ်မှာ လဲ … ဘယ်နားမှာ လန် ထွက် နေတာလဲ .. မင်းမြင်ရလား ”
“ ဟာ ဒီကောင် အညာသား.. လန် ထွက် ပါတယ် ဆိုနေမှ …”
“ ဟုတ်.. ဟုတ်ပါ့ မလားကွ.. ဝိုင်းစု မှာမှ ယောက်ျား မရှိသေးတာ.. ရှင်ဖုန်း ဆိုဟုတ်သေး ”
“ ဒီ သောက် အညာသား နဲ့တော့ ဟုတ်နေပါပြီ .. မိုက်တယ် ပြောတာကွ ..သောက်ရေးထဲမှ ဘဲ မင်းက ”
“ အင်း.. မိုက်တယ်.. မိုက်တယ်..”
အဲဒါ ပေါက်ကျိုင်း ရှေ့မှာ ချာတိတ်နှစ်ကောင် အချီအချ အမှန်တကယ်ပြောတဲ့ စကားပါ.. စကားရိုင်းရင်ခွင့်လွတ်ပါ ခင်ဗျ.. တစ်ယောက်က မြို့ကြီးသားလူလည် ထင်ပါတယ်.. တစ်ယောက်က အထက်အညာက ထင်ပါ့.. သူတို့ ပြောဆို ကြတာလေး ကို အူတူတူ လဒူပေါက်ကျိုင်း ဆက်စပ်တွေးတော မိရင်း တစ်ဖြေးဖြေး တစ်ရေးရေး...... ...။
( အမှန်တစ်ကယ်လဲ ဒီစကားတွေကို သဘောပေါက်ပါဘူး .. သူတို့ပြောတဲ့ စကားတွေက တော့ အမှန်ပါ..ချာတိတ်ကြီး ပေါက်ကျိုင်း မလဲ မကြီးမငယ် နဲ့ အဲဒီပွဲ ကို သွားကဲလိုက်သေး သဗျာ…. )
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 11:06 PM2comments:
ဒီထဲက သူတို့လေးတွေ ရဲ့ ဘဝအကြောင်း ကို နားထောင်မိရင်း ပေါက်ကျိုင်း ရင်ထဲ ဆို့နင့်သွားလို့ ဘယ်လိုမှ မှတ်ချက် မပေး နိင်တော့ပါ ခင်ဗျာ..
အော်... သူတို့ ရဲ့ ဘဝ လေးတွေ...
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 8:19 PM2comments:
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 2:19 AM No comments:
လဒူပေါက်ကျိုင်း တို့လို မလုပ်မကိုင်တတ်သူများ အတွက်ပါခင်ဗျ..
အလွန် ညဏ်ရည်နဲရှာတဲ့ အူတူတူ လဒူပေါက်ကျိုင်းကို မေးလ် လေးတစ်စောင် ရောက်လာခဲ့ပါတယ် .. အဲဒါလေးက တော့ ကိုကိုမမ ဘလော့ဂါတွေအတွက် တန်းပလိတ် တွေကို ဟိုဖက်ဒီဖက်ပြောင်း အရောင် ဘက်ဂရောင်း စာလုံးအတည့်အစောင်း ဘလော့ဂ် တန်းပလိတ် အတွက် ဘာတစ်ခုမှ လိုတယ်မရှိအောင် ငတုံး မောင်ပေါက်ကျိုင်း တွေလိုဟိုပြောင်းသည်ပို့ လက်ကမြင်းတတ်တဲ့ ပါတီပါချက် အသေးအမွှားဘလောဂ် သမားလေးတွေ အတွက် သူ့ခမျှာ မျက်စိ အလွန်နောက်လာတယ် ထင်ပါရဲ့.. ပို့ပေးလိုက်သူကို မောင်ပေါက်ကျိုင်း အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါကြောင်းခင်ဗျာ.. ။
အလွန်လွယ်လှတဲ့ တန်းပလိတ် လုပ်နည်း ဗွီဒီယို လေးပါ..။
လင့် ကလေးက ဒီမှာ ပါခင်ဗျ..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 5:23 AM4comments:
အခုလိုနွေဦးရာသီမှာ အပူလေရုးတညှင်းညှင်းဝေ့ဝဲတိုက်လိုက်တာကြောင့် အိမ်ရှေ့က တမာပင်က ရွက်ကြမ်းတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေပြီး ရွက်နုသစ်လေးတွေက တနှော့နှော့ လူပ်ခတ်နေလေရဲ့ ..၊ တရစ်ရစ်ဒေါသကြီးလာတဲ့ နေမင်းကြီးကလဲ တလောကလုံးကို စူးစိုက်ကြည့်လို့နေတယ် .. စူးရှရှနေမင်းကြီးနဲ့အတူ မောင်ပေါက်ကျိုင်းလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာလဲ သူနဲ့အပြိုင် …၊ ( အမယ် အမယ် ပေါက်ကျိုင်းတစ်ကောင် ကဗျာတွေ ဆန်နေလိုက်တာ ပြီးမှ သောက်တလွဲတွေ လုပ်ဦးမှာ သူ့ထုံးစံ ) .. ပေါက်ကျိုင်းမလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရနေမိသေးတော့…။
ပေါက်ကျိုင်းဟိုး.. ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ တောင်ကြီး အ.ထ.က ( ၆ ) မှာ သူငယ်တန်းစတက်ရတဲ့ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်ထဲကအမှတ်( ၉ ) ကနေ လက်တွဲမဖြုတ်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ရှိသဗျ.. သူ့ရဲ့ မဲမှောင်တောက်ပတဲ့ အသားအရည်ကို နေ့တဒူဝ သနပ်ခါးနဲ့ဖုံးဖုံးထားလွန်းလို့ ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေခေါ်ဝေါ်နုတ်ကျိုးနေတဲ့ သနပ်ခါးအောင်ဆွေ…၊ ပြီးတော့ ပေါက်ကျိုင်းတို့ အုပ်စုထဲမှာ ဘဏ္ဍာရေးအင်အားတောင့်တဲ့ ရှမ်းလုလင်မုန့်တိုက်က ထွန်းထွန်းဝင်း ဆိုတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းတို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ ဂျပုချစ်တီး.. ၊ ပုလုံးလုံးလေးနဲ့ သန်းသန်းစိုးလို့ခေါ်တဲ့ မဂျိုး…၊ နောက်ပြီး ပါးအို့နီနီလေးနဲ့ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရှမ်းမလေး နန်းဟွန်ပေါင်း ( ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေကတော့ ရှမ်းပဲပုပ် လို့ဘဲခေါ်ပါတယ် ) ရယ်..၊
အလွန်မျက်နှာပြောင်လို့ နာမည်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြောင်ကြီး ဆိုတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းရယ်တို့က ဆယ်တန်း အထိ အတူ တတွဲတွဲမခွဲတမ်း ခင်ဗျ..။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဝေလေလေပေါက်ကျိုင်း နဲ့ သနပ်ခါးအောင်ဆွေ က ဆယ်တန်းကို ပေါက်ကျိုင်းလေနဲ့ စာတွေမကြေညက်သေးလို့ ဆိုပြီး အဲဒီကျောင်းမှာဘဲ တစ်ပြန်ဝါဆို.. ၊ စာတော်တဲ့ မဂျိုး ၊ ဂျပုချစ်တီး နဲ့ ပဲပုပ်မ ကတော့ ဆယ်တန်းအောင် အဲဒီတုန်းက ဒီဂရီကောလိပ် သာ ရှိသေးတဲ့ အခု တောင်ကြီးသက္ကသိုလ် မှာ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ ..။ ဒါပေမဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာဆိုရင် ဒီငါးယောက်က အမြဲ တယောက်ကိုတစ်ယောက် စလိုက်နောက်လိုက်လိုက် လုံးလားထွေးလားနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းအိမ်မှာချည်းဘဲဆိုတော့ ပေါက်ကျိုင်းအမေက မျက်စိနောက်လို့ တဟဲ့ ဟဲ့ နဲ့..အဲဒီလို….။
ဒီလိုနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေ လူပျိုပေါက်တွေဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်နဲ့ရွယ်သူဆန့်ကျင်ဖက်တွေကို စိတ်ဝင်စား မျက်လုံးကစားတတ်လာပြီဆိုပါတော့ ခင်ဗျ..။
အဲဒီမှာ စပြီးဖေါက်တာက နတ်ကတော်အရှုံးပေးရလောက်တဲ့မျက်နှာနဲ့ သနပ်ခါးအောင်ဆွေ.. ဒီကောင် တနေ့သားမှာ ပေါက်ကျိုင်းနားနားကပ်ပြီး သူ ပဲပုပ်မကို ကြိုက်မိနေပြီ ဖွင့်ပြောဖို့ကလဲ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ဖွင့်မပြောရဲ တကယ်လို့ ပြောလိုက်ပြန်ရင်လဲ သူ့ဗလနဲ့ သူ့ကိုထုထောင်းမှာကို ဒီလူဗာလံ မောင်မောင်သနပ်ခါး ကလဲ ကြောက်သေးလို့ .. အဲဒီလိုသေဖေါ်သေဖက်လာညှိသေးသဗျား..။ ဟုတ်မှာ အခုတလော တရုပ်မသာ မျက်နှာနဲ့ သူ့ရဲ့ ခေါ်တောမျက်လုံးက ပဲပုပ်မ ဆီမှာ တဝဲဝဲနဲ့ .. ၊ ပဲပုပ် ကလဲ ရှမ်းကလဲရှမ်းလူမျိုး နဂို ဝင်းဝါတဲ့ အသားအရည်က အပျိုဖေါ်ဝင်လာပြီဆိုတော့ တော်တော်ကြီးကို လှလာတာပါ ..၊ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ သူ့ရဲ့အလှကို သတိထားမိလာလို့ ခဏခဏခိုးခိုးကြည့်မိတာအကြီမ်ကြိမ် ..ဒါပေမဲ့ သူ က အူတူတူလဒူပေါက်ကျိုင်းကို ဂျိုကာရုပ်လိုဘဲ သဘောထားပြန် ၊ ဒီကလဲ သူ့ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အူမချေးခါးမကျန် သိမြင်နေတော့ ဘယ်လို့မှ မဘယ်လိုပါဘူးခင်ဗျ..
ဆိုတော့ကာ … မောင်သနပ်ခါးကို တစ် ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း စာပေး ၊ နှစ် .. နှစ်ယောက်သားဆုံမိရင် ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်နိကာကြီးကိုရင်ဖွင့် ၊ သုံး .. လူကြီးစုံရာနဲ့ တောင်းရမ်းစေ့စပ် လို့ မောင်ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ မဟာအတွေးအခေါ်အချွန်နဲ့ မ ပါလေရော ..။ ဒါပေမဲ့ ခွေးဟောင်သံ သဲ့သဲ့လေးကြားမိရင်တောင်မှ ပြေးဖို့ ဖိနပ်ချွတ်စုံကိုင်ထားတတ်တဲ့ မဟာ့မဟာဗန္နုလအနွယ်က အစီအစဉ် တစ်ကိုပယ် နှစ် ကိုဖြုတ် သုံး က ဆယ်တန်းတောင် နောက်ထပ်ဝါဆိုနေရတုန်း နှပ်ချေးတောင်မစင်သေးဘဲနဲ့ မယားတရုးရလားဆိုပြီး သူ့ရဲ့မွေးသမိသဖ က ဖနောက်နဲ့ပေါက် အိမ်ကခေါင်းနဲ့ဆင်းရမှာ တစ်ကြောင်း ရုပ်သိမ်းပါသတဲ့ ..။
အင်း ဒီလိုနဲ့ မောင်ပေါက်ကျိုင်းမလဲ မဖြစ်ချေဘူး .. ဒီကောင် မောင်သနပ်ခါး နေမြင့်လေ အရူးရင့်လေ ဖြစ်နေပြီ ငါကယ်မှ ဒီသောက်ရူးအကြောင်းလှမယ် ဆိုပြီး မင်းစာရေးကွာ ငါပေး ပေးမယ် ပြောတော့ ဒီကောင် အူမြူးသွားလိုက်တာ နပြာကြီးအောက်သွားမရှိတဲ့ အတိုင်းခင်ဗျ..။
ဒီတော့ ရည်းစားစာမရေးတတ်တဲ့ သကောင့်သား ကို ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ပေါက်တတ်ကရ အပြောတွေလိုက်ရေးခိုင်း လို့ သူ ဂုဏ်ပြုပူဇော်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကျစိမ့် လေးနဲ့ အီကြာကွေး ကို ကိုင်ရင်းနဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေ မှာ မျောက်မူးလဲ တို့တစ်သိုက် အိမ်လာရင် စာကိုပေး မောင်သနပ်ခါးကို အဲဒီနေ့မှာ ခဏရှောင်ခိုင်းထားဆိုပြီးအတွေးနဲ့ ဒီမဟာပရောဂျက်ကြီးကို စရမယ်ဆိုတော့ မျက်လုံးက ခပ်လှုပ်လှုပ်ရယ်..၊ အလွန်ကပ်စေးနဲဇီဇာကြောင်တဲ့ မောင်သနပ်ခါး မသထာရည်စာလေးကို မဟားဒယား အပင်းတက်အောင်မျိုဆို့ထားမိလို့သာ လုပ်ပေးရမှာ ဒီရှမ်းပဲပုပ်မ ရဲ့ မိဘတွေက ဥယျဉ်ခြံမြေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတဲ့ မျိုးရိုးပီပီ သူက သန်မာထွားကြိုင်း စိုးမြတ်သူဇာ ဆိုက်ခင်ဗျ ..
တော်ကြာ ဘာသောညာသော အကြောင်းမရွေးဘူး ဒူးပျံလား ၊ တစ်တောင်လား ၊ နားရင်းလား ၊ ငယ်ပါလား လာထားဆိုရင် … အံမယ်လေး လေး .. ပေါက်ကျိုင်းတွေးပြီး ကြက်သီးတစ်ဖြန်းဖြန်း ထမိပါတယ် . ဆရာကြီးဂိုက်နဲ့ သြဝါဒ ပေးမိတာ မှားပြီလားလို့လေ..။
ကဲ အခုမှ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး အတွေးတွေနဲ့ စနေနေ့လဲရောက်ရော လာပါပြီ ဒီမျောက်မူးလဲမမတွေ ထုံးစံအတိုင်း အီမ်မှာ တီဗွီကြည့် အတင်းပြော မီးဖိုချောင်ထဲမှာ တကုပ်ကုပ် လုပ်နေတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းအမေဆီမှာသွားရှုပ် လက်ဖက်သုပ်စား နဲ့ ခြေကောလက်ကော ပါးစပ်ကော မနားတမ်းအလုပ်ပေးနေလေတော့ မောင်သနပ်ခါးရဲ့ အူကုန်အသည်းကုန်ချစ်မေတ္တာစာကို ခါးကြားလိမ်ရင်းအခွင့်အရေးချောင်းနေရတယ်ခင်ဗျ...။
ဟောတွေ့ပါပြီ ရေတွင်းဘေးမှာ တယောက်ထဲရေခပ်နေတုန်း…
“ ပဲပုပ် “
“ ဘာလဲ ရေကူခပ်ပေးမို့ မလား .. နင့်အမေကိုလဲ ကူပါဦးဟဲ့ ”
“ မဟုတ်ဘူး.. စာ စာ ”
“ ဘာကြီးလဲ စာ ”
“ ဟုတ်ပါဘူးဆို ဟို သနပ်ခါးက နင့်အတွက်ပေးခိုင်းလိုက်တာ ရော့ ရည်းစားစာ ”
“ အမလေး.. သောက်ပလုပ်တုတ် လန့်လိုက်တာ နင်အသံကြီးကလဲ အဟီး ”
“ သနပ်ခါးက ရည်းစားစာပေးတယ် ငါ့ကို ”
“ ဟုတ်တယ် ယူ … ယူထားလိုက် ကုသိုလ်ရတယ် အဟီးဟီး ”
ဒီရှမ်းပဲပုပ်မရဲ့ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်မျက်နှာကိုငေးနေရင်း ပေါက်ကျိုင်း တစိမ့်စိမ့်ကျောချမ်းလာလို့ စာကို ဘတ်ကနဲ သူ့လက်ထဲကို ထဲ့ပေး ပြီး မီးဖိုချောင်ထဲကို သုတ်ခြေတင်ရောခင်ဗျ.. သူ့ အကြောင်းမရွေးကြီး ဒူး တစ်တောင် တွေမလာခင် ရှောင်မှ ရှောင်မှ.. ။
ဒီလိုနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းအမေနားက မခွာဘဲ ဟိုဟာလုပ်သလို ဒီဟာကူလုပ်ပေးနေသလို ဆိုတော့.. ပဲပုပ်မ အခွင့်မသာဘဲ အပြင်ကနေ ပေါက်ကျိုင်းကို မျက်စောင်းထိုးလိုက် ပါးစပ်က အသံတိတ်ပါးစပ်ပွစိပွစိ ပြောလိုက် နဲ့ မေတ္တာပို့နေလိုက်တာ မပြီးနိုင်တော့ပါဘူး..၊
ဂျပုချစ်တီးနဲ့မဂျိုးကတော့ နဂိုထဲက အေးလွန်းလို့ ပေါက်ကျိုင်းနဲ့ ပဲပုပ်မ ကို တလှည့်ဆီ ငေးကြည့်နေလိုက်တာ ကြောင်တောင်တောင်.. ပေါက်ကျိုင်းတို့နှစ်ယောက်က ဘာလဲပေါ့ စပ်စုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့…။
ဒါပေမဲ့ ဒီဂျပုနှစ်ကောင်နဲ့ ပဲပုပ်မ တို့ ညနေစောင်းအိမ်ပြန်တဲ့အထိ ဘာသံမှမကြားရလို့ ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ မဟာစီမံကိန်းကြီး အောင်မြင်ပြီဆိုပြီး သဘောတွေခွေ့နေလေရဲ့ဗျ..၊ မနက်ဖန်မှ မောင်သနပ်ခါးဆီ အကျိုးတော်ဆောင်ခ ဘောနပ်လေး ပိုပိုသာသာ တောင်းဦးမှ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အူကိုရွှင်လို့..
နောက်နေ့လဲရောက်ရော အိမ်ကိုလာလည်တဲ့သူက ချစ်တီး မဂျိုး သနပ်ခါးအောင်ဆွေ တို့ဘဲ ပေါ်တော်မူလာပြီး ပဲပုပ်မ တစ်ယောက် မတွေ့တော့ ပေါက်ကျိုင်းနဲ့ မောင်သနပ်ခါးတို့ အချင်းချင်းမျက်စ ပစ်နေပြီ .. ဘယ်လိုလဲအကြည့်တွေနဲ့ပေါ့လေ သူစိတ်များဆိုးသွားလို့လား ဒါမှမဟုတ် ဒီမောင်သနပ်ခါးကို မတွေ့ရဲအောင်ရှက်နေလို့လား ဆိုပြီး ပေါက်ကျိုင်းစလိုက်တဲ့ ဇတ်လမ်းက ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်း စားမိသလိုအဖြစ်နဲ့ ပေါက်ကျိုင်းတစ်ကောင် ထိုင်မရထမရ ဖြစ်နေရရောဗျို့..။
ဆိုတော့ကာ ချစ်တီးနဲ့မဂျိုးတို့က မနေ့ကအဖြစ်အပျက်ကို ပဲပုပ်မ ပြောကြောင်း သူ့အပေါ်စိတ်သဘောထားပြောင်းသွားတဲ့ သနပ်ခါးနဲ့ သောက်လိုက်ကမ်းဆိုးမသိတဲ့ အောင်သွယ်ပေါက်ကျိုင်းကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်က လုံးဝဖျက်လိုက်ပြီလို့ အမှာတော်ပါးလိုက်တော့ သတဲ့ဗျာ ၊ သနပ်ခါး ကလဲ သူငယ်ချင်းကို ရည်းစားစာပေးမိတာ သူ့ရဲ့အပြစ်ဆိုပြီး သူ့ပြူးကြောင်တောင် မျက်လုံးကို အတင်း ရီဝေ အောင်လုပ်ပြီး ကောင်းကင်ပေါ်ကိုလက်ညိုးတစ်ထိုးထိုး ရင်ဘတ်ကိုတစ်ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ပဲပုပ်မရယ် ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါ အားလုံးငါ့အပြစ်တွေပါ ပဲပုပ်မရှိရင် ဒီကမ္ဘာမှာနေလို့တောင်ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး လို့ ဝင်းဦးအကြောဆွဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပင့် စတိုင်နဲ့ ဟန်ရေးလုပ်ပြောပြောနေလို့
ဒီကောင်ရုးပုံများပြောပါတယ်လောက်စာလုံးထုံးတို့ထားတဲ့မျက်နှာ ..အတင်းရီဝေထားတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ စာရေးဆရာမောင်သာပြည့်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေထဲက စာတွေကို ရွတ်ပြီး အလွမ်းသယ်နေလိုက်တာများ ပေါက်ကျိုင်းတို့သုံးယောက် အိမ်နေရိပ်ထဲမှာ ဖင်ထိုင်ခုံလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ စိတ်မသက်မသာအားပေးလိုက်ရတာ နေကိုစောင်းရောဗျား.. ညနေလဲရောက်ရော ဖီလင်တွေတက်နေတဲ့မောင်မင်းကြီးသားက သူ့ရဲ့ ရည်းစားတောင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသဲကွဲဖီလင်ကို အရက်နဲ့ဆေးကြောမယ်ဖြေဖျောက်မယ်ကွာ ဆိုပြီး စကားကြီးစကားကျယ် လာညှိတော့ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ အားရဝမ်းသာ အမြည်းနဲ့မူးရတော့မယ်ဆိုပြီး ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားသဗျ.. ( ပေါက်ကျိုင်းတို့ ယာမကာလေးမှီဝဲပြီဆိုရင် ဆိုင်ရှင်တွေက သဘောအလွန်ကျဘဲ အရက် ၅ကျပ်ဖိုး ဆိုရင် အမြည်းက တစ်ဆယ်ဖိုးလောက်ကိုင်မှ မူးတယ်ဆိုတော့ ခမျှာတွေမလဲ အမြည်းရောင်းအားတက် တော့ ပေါက်ကျိုင်းတို့ချာတိတ်တွေလာရင် အူယားဖားယား ကြိုဆိုလိုက်တာ မျက်စေ့ကိုနောက်ရော ) အဲဒီအချိန်တုန်းက တစ်လုံးကို တစ်ဆယ်သာ ပေးရတဲ့ ရွှေလိမ္မော်အရက် တစ်ပိုင်းကို တယောက်တစ်ဝက်ဆီ ဖန်ခွက်ထဲထဲ့ အမြည်းကောင်းတာလေးတွေ တစ်ဆယ်ဖိုးလောက်မှာပြီး အရက်လေးတစ်ငုံစွတ် အမြည်းကို ပါးဖြဲနားဖြဲစား ဒီအရည်ဝင်လာပြီဆိုရင် ဒီသောက်ရုးသွေးကစလာပါပြီ..၊
“ ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါ ပဲပုပ်ရယ် ဒီအချစ်ကြီးတတ်တဲ့ ငါ့ကိုခွင့်လွတ်လိုက်စမ်းဘာ ”
“ နင့်ရဲ့အမုန်းကို ငါတသက်လုံးကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူဘာ့မယ်… အိ.. ”
“ ဟဲ့ကောင် သနပ်ခါး ဘေးကလူတွေကြည့်နေပြီ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ရှက်စရာကြီး ”
“ မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ အချစ်ဆိုဒါ မပေါက်ဖွားဖူးတေးတော့ ငါ့အဖြစ်ကို ဘယ်လိုစာနာနိုင်မှာရဲ တငယ်ဂျင်းရာ .
“ သူမကြိုက်လို့နေမှာပေါ့ သေချင်းဆိုးရဲ့ နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ကွာ ငါကူ အောင်သွယ်ပေးမှာပါဟ .
“ ငါ့ရင်ထဲက အချစ်ကို မင်းမတိနိုင်ပါဘူး ပိတောက်ဆိုပိတောက် တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးက
ငါ့ အတဲနှလုံးပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရေးထိုးထားမိနေဘီကွ အီး ဟီးဟီး.. ”
အရည်လေးကလဲစွတ်လာ ပေါက်ကရတမ်းလေးဆယ် အော်အော်ပြီးငိုခြင်းချနေလို့ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ ဘေးဘီ ယမကာဆရာတွေကို အားနာလာတာနဲ့ ဒီငိုကြောရှည်မောင်သနပ်ခါးကို ဆိုင်ပြင်ဆွဲထုတ်ခဲ့ရသဗျ.. မှောင်လဲမှောင်လာပြီဆိုတော့ တယောက်ပုခုံးကိုတစ်ယောက်ဖက် သူ့ရဲ့မဟာအချစ်နိကာကြီးကိုနားဆင် ရင်း အိမ်ပြန်လာလိုက်ကြတာ ပဲပုပ်မရဲ့ အိမ်လမ်းဆုံကိုရောက်တော့ ဗြုန်းဆို တုန့်ကနဲရပ်တဲ့ပြီး လူရိပ်ရောင်မြင်နေရတဲ့ ပဲပုပ်ရဲ့ အိမ်ကိုတည်တည်ကြီးဆိုက်ကြည့်နေတာ အကြာကြီး ပြီး ဦးကျော်ဟိန်း စတိုင် ဒူးကိုဖြေးဖြေးချင်းထောက် လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီး
“ အချစ်ဟာ မီးလိုပူလောင်စေနိုင်သလား ပဲပုပ် ” လို့ သူ့ရဲ့ ဂီလာနမောင်းကွဲသံကြီးနဲ့ အော်လိုက်တာ ပေါက်ကျိုင်းတောင် ကြက်သီးထလန့်ဖြတ်သွား ပြီး ဘေးအိမ်တွေက ဆူဆူညံညံ အသံတွေကလဲ မီးကိုရေနဲ့သတ်လိုက်သလိုရှဲကနဲ ငြီမ်တိတ်သွားသဗျ..
“ ဒီ ပူလောင်လွန်းလှတဲ့ မီးကိုမှ ငါဆိုတဲ့ကောင်က ရဲရဲကြီး ဆုပ်ကိုင်မိလိုက်ရပြီ ပဲပုပ်ရေ.. ” ဟေ့ကောင် သောက်ရုးရဲ့ မင်းဘာတွေ ပေါက်ကရလျှောက်အော်နေတာလဲဆိုပြီး အတင်းဆွဲထူ လို့ ပေါက်ကျိုင်းတို့နှစ်ကောင်သား ခွေးတစီစီနဲ့…။
“ ပဲပုပ် ငါနင့်ကို ”
“ ဒေါက် ”
“ ဘာ သံလဲ ဟ ပြောင်ကြီး ”
“သိပါ့မလား သေနာရဲ့ ခြံစည်းရိုး ဆီကဘဲ ”
“ ပဲပုပ် ငါနင့်ကို အရမ်း ”
“ တောင် ”
“ လေးခွနဲ့ဆော်သဟ သနပ်ခါးရ ”
“ အောင်မလေးဗျ .. အား လားလား တကယ်ဆော်တယ်.. ”
စက်သနပ်ပစ်သလို တဒိုင်းဒိုင်း အသံလာရာဆီကို ကြည့်လိုက်တော့ လားလား..ဝင်းတခါးအဝ လမ်းမီးရောင်အောက်မှာ လောက်စာလုံးလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ပြီး ပေါက်ကျိုင်းတို့ဆီ ချစ်လှစွာနဲ့ လောက်စာလုံးပန်းလေးတွေ တယုတယ ကျဲနေတဲ့ ပဲပုပ်မကို မြင်တော့ .. နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖေါက်ဆိုပြီး ခြေကုန်သုတ်ပြေးလိုက်ရတာ.. ခုနက မြေကြီးပေါ်မှာဘဲ အိပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အမူးကောင်သနပ်ခါးက ပေါက်ကျိုင်းရှေ့ ဆယ်လှမ်းထက်တောင်
ပိုသေးသဗျား လှစ်ကနဲလှစ်ကနဲ ….။
နောက်နေ့ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ ချစ်တီး မဂျီုး တို့ဆီနား သတင်းရတာကတော့ မနေညက သနပ်ခါး တစ်ယောက် ပဲပုပ်ဆီ သူ့ဂီလာနမောင်းကွဲ အသံနဲ့ ပဲပုပ် ပဲပုပ်နဲ့ တပုပ်ထဲပုပ်နေလို့ မဟာအရှက်တော်ရခဲ့ကြောင်း ပြီးတော့ သွေးတိုးသည် ပဲပုပ်အမေ အလွန့်အလွန်သွေးတက် လန့်ဖြန့်သွားလို့ သူတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားကြောင်း သိလိုက်ရတယ်ခင်ဗျ .. ။
ဒါပေမဲ့ ဟိုး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မောင်နှမအရင်းတွေလိုနွေးထွေးပေါင်းသင်းလာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ကာ စကားမပြောမတည့်လဲ ဆယ့်ငါးရက်တစ်ပါတ်ပါဘဲ... ဒါပေမဲ့ ပဲပုပ်မ ကတော့ သနပ်ခါးကို နေ့တိုင်းမျက်စောင်းတထိုးထိုးလုပ်နေတုန်း သနပ်ခါး ကလဲ ပဲပုပ်မ ကို ပြူးကြောင်တောင်မျက်လုံးကို အတင်း ရီဝေ နေအောင်လုပ်ပြီး ခိုးခိုးပြီး ခဏ ခဏ စိုက်စိုက်ကြည့် နေတုန်း…..။
ဒီလိုနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အကျိုးအပဲ့တွေနဲ့အတူအပေါင်းအသင်းနဲ့ ဝေးဝေးသွားလိုက်တာ ဘဝ လှိုင်းလေကြမ်းကြမ်းထဲမှာ ကူးခပ်လိုက်ရ မြုတ်ချည်ပေါ်ချည်နဲ့ ဖတ်ဖတ်မောရလိုက်ရတာ လေ…
ထီးထမ်းလမ်းလျှောက်ဘဝဆယ်နှစ်နှစ်ကျော် အလူးအလဲစိတ်ဒါဏ်ရာ ဗလပွနဲ့ ရှိနေတုန်းမှာ ပေါက်ကျိုင်းအမေ တောထဲတောင်ထဲ မကြောက်မရွံ့ သားဇောနဲ့ ပြန်လာခေါ်မှ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖေ.. ပေါက်ကျိုင်းကို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ မျက်မှန်လက်လက်အောက်မှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းလေး မြင်ခဲ့မိပါရဲ့ ဗျာ..
ပေါက်ကျိုင်း ၂၀၀၃ ခုနှစ် အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ချစ်တီးနဲ့မဂျိုးတို့ လက်ထပ်ပြီး သူ့ရဲ့မုန့်တိုက်မှာဘဲ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ပြီး အဆင်ပြေကြတယ်လို့ သတင်းကြားတော့ အားရဝမ်းသာ သူ့တောင်ကြီးအိမ်ဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ချစ်တီးက သူတို့နှစ်ယောက်က ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကြိုက်လာကြပါသတဲ့ ဒါပေမဲ့ ဒီ နှစ်ယောက်က အေးလွန်းပြီးလျို့ဝှက်ထားနိုင်လို့ဘဲလား ပေါက်ကျိုင်းကဘဲ ညံ့လွန်းလို့လားဘဲခင်ဗျ.. ဒါပေမဲ့
သူငယ်ချင်းတွေ မခွဲမခွာအတူတူဆိုတော့ ကျေနပ်မိတာတကယ်ပါ..။
နောက်ပြီး သနပ်ခါးအောင်ဆွေ လဲ ရန်ကုန်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အမ်ဒီကြီးဖြစ်နေပြီဟ ပြီးတော့ ပဲပုပ်မနဲ့ ယူသွားတာ ကလေးတောင် အထီးတစ် အမနှစ် ပေါက်နေပြီကွ လို့ အားရဝမ်းသာ အာလုပ်သံကြီးနဲ့ပြောတော့ ပေါက်ကျိုင်းပါးစပ်ကနေ “ ဟေ ” လို့သာထွက်နိုင်ပြီး အံသြတကြီးကိုဖြစ်လို့ .. ၊ ဘယ်နှယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစောင်းစေးနဲ့မျက်ချေး လိုဖြစ်နေရကာနေ ဘယ်လိုငြီမ်းချမ်းရေးရသွားတာလဲ လို့တွေးရင်း ဒီသနပ်ခါးအောင်ဆွေရဲ့ အိမ်ကိုသွားတော့... အားရဝမ်းသာ ငယ်ငယ်ကလိုဘဲ ဆဲကြဆိုကြထုထောင်းကြနဲ့ ကြိုဆိုတော့ ပေါက်ကျိုင်းငယ်ဘဝကိုသတိရမိပြီး မျက်ရည်စို့မိတာအမှန်ပါ.. ။
သနပ်ခါးအောင်ဆွေကတော့ လောက်စာလုံးထုံးတို့ငယ်ရုပ်မပျောက်သေးပေမဲ့ ဒီ စိုးမြတ်ပဲပုပ် ကတော့ငယ်ငယ်ဘဝက ငါးရန့်ကိုယ်လုံးကနေ ဘယ့်နှာ ဖား ဘော်ဒီကြီး ထွက်လာရသလဲဆိုတာကို ပေါက်ကျိုင်းတစ်ကောင် လေ့လာသုံးသပ် စဉ်းစားနေတုန်း.. ပဲပုပ်ရဲ့ ငယ်ဘဝ ဝသီအတိုင်း ဟိုမှာအကြာကြီးဘာသွားလုပ်နေတာလဲ … အဆင်ပြေလား မိန်းမကောရပြီလား ၊ နင့်အဖေနဲ့အမေ တောင် နင်သေပြီဆိုလို့ ဆွမ်းသွတ်တရားနာ လုပ်နေတုန်း အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ မဂျိုး ငိုပြီးတက်သွားလို့ ငါတို့မနဲ နှာနှပ်ယူရတယ် .. အဲဒီနေ့ ညနေမှာဘဲ သားအကြီးကောင်ကို မွေးတာ. ပေါက်ပန်းပန်းလေးဆယ် ပြောလဲပြော ပေါက်ကျိုင်းကို ဧည်ခံထားတဲ့ လက်ဖက်သုပ်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းကို သူချည်းဘဲ ပလုပ်ပလောင်းစား နဲ့ တော်တော်လေးကို အလုပ်ရှုပ်နေလေရဲ့ခင်ဗျ..၊ ။
ဒါနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းရင်ထဲ ကလိကလိဖြစ်နေတဲ့ ပဲပုပ်နဲ့သနပ်ခါးတို့ရဲ့ ချစ်ကြည်ပေါင်းထုပ် ကိစ္စ ကို မေးတော့ .. သနပ်ခါးမလဲ ပဲပုပ်မ ကိုမရတော့ ရင် ထမင်းလဲမစား ကျောင်းလဲမှန်မှန်မတက်တော့ တမှိုင်မှိုင်တတွေ နဲ့မို့လို့ ငယ်သံယောဇဉ်နဲ့ သနားပြီး လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ ပါသတဲ့ .. ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်အခုလိုသံယောဇဉ်ကြီးကြီးနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်တာ ပေါက်ကျိုင်းကျေးဇူးကြောင့်ဆိုပြီး မင်း သေသွားပြီထင်လို့ ဆွမ်းသွတ်တဲ့နေ့မှာမွေးခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ အကြီးကောင် သားဦးကို အိမ်နာမည် ပေါက်ကျိုင်း လို့ တခုတ်တရ သတိရစွာနဲ့ ပေးခဲ့ပါသတဲ့ .. ဒါ ဟုတ်လားလို့ သနပ်ခါး ကို ပေါက်ကျိုင်းမေးတော့ ဒီကောင် ပြန်မဖြေဘဲ ပြုံးစိစိကြီးလုပ်နေလို့ သူ့ရဲ့မဒမ်စိုးမြတ်ပဲပုပ်က မျက်စောင်းတခဲခဲ…။
သူကဘဲ ပြောင်ကြီး နင်မိန်းမယူသေးဘူးလား မစွံနိုင်လို့ဘဲလား နင်အစွမ်းအစမရှိရင် ငါရှာပေးမယ် လို့ ပြောတော့ .. အေးဟာ ငါလဲ ဒီကိုရောက်တုန်း မိန်းမတစ်ယောက်လောက်ရှာပေးဖို့ ငါ့အဖေနဲ့အမေ ဆီ အပူကပ်မလို့လုပ်တုန်း ငါ့မလဲလေ နင့်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ သားစိတ်မယားစိတ်ကုန်ပြီး ကတုံး တုံး တောထွက်ရမလား စဉ်းစား နေတာ လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒီပဲပုပ်မ ငယ်သောက်ကျင့်အတိုင်း ဆဲလိုက်သာမှ မိုးမွန်လို့…။
( ပဲပုပ် နော် ချစ်လို့ကြည်စားတာနော် ချိတ်ချိုးနဲ့ ကြားလား .. ဖုန်းပိတ်ထား ဦးမှ အဟီး.)
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:11 AM6comments:
ဒီ မျောက်လောင်းနှစ်ကောင်ချစ်စရာကောင်းစွာ ကမြင်းကြောထနေတာ မြင်ရတော့ ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ မျောက်လောင်းငယ်ဘဝကို သတိရမိသဗျ..၊ ဟိုးတုန်းက သူငယ်ချင်း ငါးယောက် ဟာ မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအထိ လက်တွဲမပျက်ခဲ့..၊ အထက်တန်းကိုကျော်ပြီး တယောက်တနေရာဆီ ပြန့်ကျဲသွားလိုက်တာ .. မောင်ပေါက်ကျိုင်း မလဲ ရှစ်ဆယ်ရှစ်နှစ်လွန်တွေရဲ့ လှိုင်းတံပိုးအောက်မှာ မြုတ်ချည်ပေါ်ချည်နဲ့ ကူးခပ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မောရပါ့...။
ပေါက်ကျိုင်း သနင်္သာရီ တောထဲတောင်ထဲမှာ ဆယ့်နှစ်နှစ် ကျော်ကျော် ထီးထမ်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေက ဘဝတွေ တိုးတက်မြင့်မားသွားကြပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အဝေးကနေ လှမ်းပြီး ဆဲကြ ဆိုကြ စကားနာတွေထိုးကြနဲ့ အဆက်အသွယ် နေ့တိုင်း အဆက်အသွယ်ရှိပေမဲ့ အပူပင်ကင်းကင်းသံယောဇဉ်တင်းတင်းနဲ့ လုံးလားထွေးလား ငယ်ဘဝ ကို ဘဲ ပိုလို့ပိုလို့ တမ်းတ မိသေးဗျာ..။
ရန်ကုန် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက အမ်ဒီ ကြီး ..သနပ်ခါးအောင်ဆွေ ၊ တောင်ကြီးက ရှမ်းလုလင်မုန့်တိုက်ပိုင်ရှင် ဂျပုချစ်တီး .နဲ့ဇနီး ဂျပု မဂျိုး ၊ ပြီး .. NGO တခုမှာ အရာထမ်းနေတဲ့ ညီမလေး အီနှော့ ရေ.. ပေါက်ကျိုင်းကို အရင်ကထက်ပိုပြီး ဖုန်းဆက်ကြ အဆက်အသွယ်လုပ်ကြဟ.. ဒီက ပြောင်ကြီးခေါ် မောင်ပေါက်ကျိုင်း တစ်ကောင် တယောက်ထဲ အသည်းက ခပ်ငယ်ငယ် မကြီးမငယ် နဲ့ငယ်ဘဝ ကို လွမ်းလွန်လွန်းလို့ ..အဟင့်.. ရွှတ်....။
အခု ဗွီဒီယို လင့်ထဲက စွတ်ကျယ်လက်ပြတ်လေးနဲ့ လက်ဖျံမှာ စာရေးထားတဲ့ မျောက်လောင်းငပြောင်လေးက ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ငယ်ဘဝရုပ်နဲ့ တထပ် ထဲပါ.. မျက်နှာမြင်ရိုက်ချင်ပါစေ အသံကြားခါးပါစေရုပ်မျိုး .. မတော်လို့ လမ်းမှာ တွေ့ခဲ့ရင် ဝေးဝေးကရှောင် ...။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:52 AM2comments:
မဂ်လေးတန်းဝင် ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ်တို့ကို ရပိုင်ထားပြီးသူ ဆရာ့ဆရာထိပ်ခေါင် သိုင်းမင်းဘုရင် တဲ့ဗျား..
မနေ့ညက ပေါက်ကျိုင်း ခမျှာ အားအားယားယား ကမ္ဘာ့ကြွက်သိုက်ထဲ ဝင် ကိုပီတာ့ရဲ့ စာမျက်နှာကို ထူးဆန်းထွေလာလေးကို ရှာရင်း ဟော...ဒီမှာ မဂ်လေးတန်းဝင် ဝိပဿနာဥာဏ်စဉ်တို့ကို ရပိုင်ထားပြီးသူ ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာလေး တစ်ခုတွေ့တော့ ပေါက်ကျိုင်းလဲ ဝမ်းသာအားရ နည်းနာယူဖို့ ထိုသူရဲ့ ဘလော့ဂ် လေးကို ဝင်ကြည့်မိတဲ့အခါ ကိုယ်ကဘဲရူးချင်နေလို့လား သူကဘဲ ထူးလို့ဆိုရမလား ပေါက်ကျိုင်းရင်ထဲမယ် မအီမလယ်ကြီး ဖြစ်မိတာအမှန်ပါ..။ ဒီ အွန်လိုင်းပေါ်က စာမျက်နှာတွေမှာ နိုင်ငံရေး ၊ဗဟုတုတ၊ ဘာသာရေး ၊ သမိုင်း ၊နည်းပညာ ၊ စာပေ ထိုထို စတာတွေကို ရေးကြ ထင်မြင် ဝေဖန် ထောက်ခံ ရှုတ်ချ ကြနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းမြင် ဗဟုသုတ အလွန်ရပေမဲ့ အခု ဒီဘလော့လေးကို တွေ့တော့ ..အော်.. နက်တွေပေါ်မှာလဲ ဒီလိုလူမျိုး ရှိပါသေးလား လို့ အုတူတူ လဒူပေါက်ကျိုင်း တွေးမိသဗျို့ အဟေးဟေး...။
ဒါနဲ့ ဆရာ့ဆရာများရဲ့ ဆရာထိပ်ခေါင် ထိုဆရာသမားကို ချက်ချင်းဘဲ အီးမေးလ် တစောင်အားကိုးတကြီးနဲ့ လှမ်းရေးပို့လိုက်ပါတယ်.. အမှန်ကလဲ အဲဒီဆရာသမားရဲ့နေရပ်နဲ့ ပေါက်ကျိုင်းနေတဲ့ ကွာလာလန်ပူ နဲ့က သိပ်ပြီးဝေးကွာမနေတာက တကြောင်း ပြီး ဆရာသမားရဲ့ပီနန်း ကိုလဲ မနက်ဖန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားစရာရှိတာက တကြောင်းကြောင့် စာကို ဒီလို ရိုးရိုးလေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်..၊ " ညီလေးရေ ညီလေးက မဂ်လေးတန်းဝင် ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ်တို့ကို ရပိုင်ထားပြီးသူ ဆိုတော့ အကို့ကို တစ်ခုကူညီလမ်းညွှန်ပေးပါ ( သူ့ရဲ့ဘလောဂ် ထဲမှာ မြန်မာပြည်ကရော တပါးနိင်ငံကရော ဝိဇ္ဖာ ဇော်ဂျီ တပသီ ဘိုးတော် ရဟန်းဆရာတော်များရဲ့ ဆရာ့ဆရာ စူပါဆရာဟု သူ့ကိုယ်သူ ဆိုထားပါတယ်.) .. အကို့လဲ ညီလေးရဲ့ မဂ်လေးတန်းဝင် ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ်တို့ကို ကျင့်ကြံချင်ပါတယ် ပြီး အကို့ရဲ့ အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂတ် တွေကို ညဏ်စဉ်ပြီးမြောက်တဲ့ ညီလေးက ကြည့်မြင်ဖြေကြားလေးစေလိုပါတယ် ..နောက်ပြီး မနက်ဖန် ပီနန်ကိုလာစရာရှိလို့ လိပ်စာပေးပါ အကို ညဏ်ပူဇော်ခ လှူဒါန်းပါ့မယ် " လို့ လှမ်းပို့လိုက်တော့ ည၉နာရီလောက်မှာ စာပို့လိုက်တဲ့ ထိုဆရာသမားရဲ့ပြန်စာက ဒီလို ဒီလိုပါတဲ့..၊။
" မဂ်လေးတန်းဝင် ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ် အတွက် အကို့ကို ထပ်တူထပ်မျှအကျိုးခံစားရမှာပါ .. သတ္တဝါအားလုံး ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ .. စေတနာမှန်လျှင် ကံကောင်းမည် ..
ပဋါန်းဆက်ရှိလျှင် တနေ့တော့ မဆုံချင်လဲနှင့်လဲ ဆုံရမည် .. bye2.."
ပြန်စာလေးကို မူရင်းအတိုင်း ကူးပေးလိုက်တာပါ..၊ သူ့ရဲ့ စာကို ပေါက်ကျိုင်း ဘယ့်လိုဘယ်နှာ အဓိပ္ပယ်နှင့်ပြန်တွေးရမလဲမသိ ....၊
အင်း ... အူတူတူ လဒူပေါက်ကျိုင်း ဘဲ ညဏ်စဉ်မမှီ. .အဲလေ .. ဂေါင်းကဘဲ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိင်လို့လား ထိုဆရာသမားကဘဲ ပေါက်ကျိုင်းကို သူ့တပည့်ထဲက အနုံအမွှားပါတိပါချက်လေးမို့များလား .. သူကဘဲ ( ညဏ်စဉ် ) ပေါက်သွားလိုဘဲလား ပေါက်ကျိုင်းကဘဲ ဂေါက်သွားလို့ဘဲလား လို့တွေးမိရင်း ... ဟစ် ဟစ် ပြီးတော့သာ ငိုချင်းချ လိုက်မိချင်တော့တယ် တကယ်..။။
သူ့ရဲ့လိပ်စာက ဒီမှာ ပါ.... ၊
အခုတလော မောင်ပေါက်ကျိုင်းတို့ မလေးရှားမှာ ဒီနှစ် နှစ်စပိုင်းက စပြီး တရားမဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသူများကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဖမ်းစီးနေတာကို တွေ့ နေရသဗျာ..လာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ အများစုဟာ တရားဝင်အလုပ်လုပ် ကိုင်နဲပါးပြီး စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေရာ ကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အိုဗာစတေး ဖြစ်သွားတဲ့ သူတွေ၊ ပြီး ပေါက်ကျိုင်းတို့ ရွှေနိုင်ငံ ကနေ တောင်ကျော်တန်းကျော်ပြီးတော့ ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေ ဟာ ၃ပုံ၂ပုံ လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ.၊.အခုနှစ်မှာ အထူးအနေနဲ့ ဖမ်းစီး ရတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များတုန်းက အန္ဒိယလူမျိုးနဲ့ ဘင်္ဂလား လူမျိုး ငါးသောင်း ကျော်ဟာ ဒီမလေးရှားနိုင်ငံထဲ ကို အလည်ဗီဇာနဲ့ အဝင်သာရှိပြီး အထွက်လုံးဝ မရှိလို့ အထူးစစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ နာဂျစ်အစိုးရက လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါ သတဲ့ ..ဒီတော့ကာ ကိုကိုရွှေ တို့အချင်းချင်း လက်တို့ပြီး ဟိုမှာဖမ်းပြန်ပြီ ဒီမှာဆွဲပြန်ပြီ ..ပုန်းကြ ပြေးကြ လွှားကြ နဲ့ ပေါက်ကျိုင်း စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်နှင့်မိပါတယ် .. ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် ဆိုသလို အမိမြေမှာ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလို့ အရဲစွန့်ကျွန်ခံ အနှိမ်ခံပြီး သမာအာဇီဝ နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာတောင် ဖမ်းဟယ်စီးဟယ် ဆိုတော့ ကျီးလန့်စား ဖြစ်နေ ပြန်တဲ့သူကပြန် ပုန်းတဲ့သူကပုန်း အလုပ်ထွက်သူကထွက်နဲ့ ကျီးအော်သောင်းနင်း …၊ ပြေးကြ ပုန်းကြ တာတွေမြင်တွေ့မိလို့ ..
မောင်ပေါက်ကျိုင်း လဲ ဟိုး… တခါသား တုန်းက ညီလေးအရင်းလို သဘောထားတဲ့ ဇေယျာအောင် ဆိုတဲ့ ချာတိတ် အကြောင်းကို ပြန်တွေး မိရင်း စိတ်ထဲမယ် ပြုံးစိစိ ကြီးကို ဖြစ်မိသဗျာ ..( သူ့အကြောင်းကို “ ရာဇဝင်ထဲက ဆယ့်နှစ်မိုင်ဇေကြီး ကို မထားခဲ့နဲ့ “ ဆိုပြီး စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ ရေးထား ခဲ့ဘူးပါတယ် ) ထားတော့ .. ဒီနိုင်ငံမှာ ကိုကိုရွှေတို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတဲ့ ကြွက် ဆိုတဲ့ မလေးရှား ရဲ တောင်ကြောက်ရတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ဇတ်လိုက် ဇေယျာအောင် ခေါ် ဇေကြီး အကြောင်းပါ.. အဲဒီ ဇေယျာအောင် ဆိုတဲ့ ဇေကြီးပုံကို မြင်အောင်ပြရမယ်ဆိုရင် မလေးရှားမှာနေတုန်း လုံးဝ မညှပ် ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကောက်ကွေးကွေး ခါးလည်လောက်ထိ ကျနေတဲ့ ဆံပင်(ဆံပင်က ဒီကိုရောက်လာကတည်းက ဆံထုံးကြီးနဲ့ ပြီး အဆိုတော် ဒိုးလုံး ကို မျက်စေ့ထဲမြင်ကြည့်ပါ ) မျက်ခွက်က ပြူးကြောင်ကျား နှတ်ခန်းမွှေး စစ၊ ..ဘော်ဒီက မိန်းကလေးတွေ ရင်ဘတ်ကို ထုထုပြီး ခရာချင်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ တခြမ်းစာ ကိုယ်လုံး၊ အပြင်ထွက်ပြီး
မှာစရာရှိတာမှာရင် ဝှီ ကနဲ မြည်အောင် ဖင်ပေါ့ပြီး လမ်းတဝက်ရောက်မှ အီမ်ပြန် ဘာမှာတာလဲလို့ ပြန်မေးနေရတဲ့ အူကြောင်ကျား ကောင်..၊ သူရဲ့ရွယ်သူ အပေါင်းအသင်းများစုံမိရင် ရန်လိုတွတ်ထိုး စလွန်းလို့ သူ့သူငယ်ချင်း တယောက်က ပေါက်ကျိုင်းရှေ့မှာ ဒီလိုပြောဘူးပါတယ် ..” ဇေကြီး မင်းမလဲကွာ ငါတို့ကိုတွေ့ရင်ရန်လုပ်လုပ်နေတာ အိမ်ဘေး တရုပ်မကြီးမွေးထားတဲ့ အသက်ကြီးပု ကြောင်တောင်မလေးစားတဲ့ လက်သီးစုတ်ခွေးလေး ဝင်းတခါးထဲကနေ ဟောင်တာ ကြနေတာဘဲ လူမလေးကြောင်မခန့် နဲ့ကွာ “ သတဲ့ဗျာ …ပြီး ပြောသေးသဗျ ..” မင်း လူကောင်သေးတာ မင်းရဲ့ --ု က ဆွဲထားလို့နေမှာ “ တဲ့ဗျာ..၊ ဟုတ်လောက်မှာပါ ပေါက်ကျိုင်းညည နှစ်ချက်သုံးချက် အပေါ့ သွားချင်လို့ အောက်ထပ်ဆင်းလာရင် ဧည့်ခန်းထဲမှာ အိပ်တတ်တဲ့ မောင်မင်းကြီးသား အနောက်ဖက်ကို လေလံတင်ထားတဲ့ သူ့အပြူးကြီးကို ညတိုင်းလိုလိုမမြင်ချင်လဲ မြင်နေရသကိုးခင်ဗျ..။ ပြီး
မလေးရှားတီဗွီချယ်နယ် တွေထဲက တီဗွီသရီးက ကြာသာပတေး ညဆယ်တစ်နာရီမှာလွှင့်တဲ့ အမေရိကန် နပန်း စီးရီးတွေကို အဲဒီညတိုင်း အအိပ်ပျက်ခံကြည့် ၊ နောက်နေ့သူ့သူငယ်ချင်းများ တွေ့မိပြီဆိုရင် ညက ကြည့်ထားတဲ့ နပန်းလုံးအကွက်တွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်လိုက် လှဲချလိုက် လုပ်နေသေးသဗျ.. ဘယ်ရပါ့မလဲ ဟို အသေးဆုံးအကြူံဆုံးက သူ့နှစ်ဆ မကရှိတာကိုး.. ပြီး ..ဟန်းဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့ ညဆယ့်နှစ်နာရီ တစ်နာရီ ထိ မျက်စိစွေအောင် ဂီမ်းကစားပြီး အလုပ်သွားဖို့ အိပ်ရထနောက်ကျလို့ သူ့ကို တူလိုသားလိုချစ်ကြတဲ့ ပေါက်ကျိုင်း ဦးလေးနှစ်ယောက်က ချစ်ခင်ယုယစွာနဲ့ နှာခေါင်းကို ခြေမညှပ်ပြီး နိူးရတာလဲ အကြီမ်ကြီမ်၊..အပြင်ကို ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ ခိုင်းလိုက်ရင် တခါတလေ ညသန်းခေါင်ကျော်မှ ပြန်ပြန်ရောက်လာလို့ ပေါက်ကျိုင်းဦးလေးတို့ ဆီးပြီး ဖနောက်နဲ့ပေါက် နှင်အချခံရတာလဲအခါခါ… ဒီတော့မှ ဇီးရွက်လောက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် ကုပ်ချောင်းချောင်းလေးနဲ့ သူမဟုတ်သလို ..။
ခွေးမြှိးကောက်ခြေထောက်စွတ် ဆိုတဲ့ စကားပုံ လို ဒုံရင်းဒုံရင်း …. အဲဒီလို ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဆယ်နှစ်မိုင်ဇေကြီးပါ…။
တခါသား တုန်းက ပေါက်ကျိုင်းဦးလေးတို့ နီးနီးနားနားမှာရှိတဲ့ TESCO ကုန်တိုက်ကြီးမှာ ဆန် ဆယ်ကီလို အိတ် တစ်လုံး သူ့ကို ဝယ်ဖို့ လွတ်လိုက်တာ ပေါ်လာနိုးပေါ်လာနိုးနဲ့ ညဆယ့်နှစ်နာရီကျော်သွားပါရောသဗျ..ဆိုတော့ကာ အိမ်က လူတွေလဲ စိတ်တွေပူ လပြာယာ ဇေကြီးရဲ့ ဖုန်းကလဲ ထုံးစံအတိုင်း မေ့ကျန်ခဲ့တော့ ကုလားများရိုက်နှက်လုပြီလား ( ဒီက တမီလ်လူမျိုးကုလားတွေဟာ အဆင့်အတန်းနှီမ့်ပြီး ထစ်ကနဲဆို ရိုက်ဟယ် ထုဟယ် လုဟယ် သတ်ဟယ် ဆိုရင် သူတို့ပါဘဲခင်ဗျ..) ရဲများဖမ်းသွားပြီလား ..TESCO ကုန်တိုက်ကြီးကလဲ အိမ်နဲ့အကွာအဝေးက မိနှစ်နှစ်ဆယ် လောက်ဘဲ လျှောက်ရတာဆိုပေမဲ့ အူတူတူလဒူ ဒီကောင် လမ်းများမှားနေပြီလား ဆိုပြီး ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေစိတ်ပူ အိမ်ပြင်ကိုတမျှော်မျှော်နဲ့ ဗြုန်းဆို ပေါက်ကျိုင်းတို့ အိမ်ရှေ့ကို ရဲကားတစ်စီး ပေါက်ချလာပါရော ၊ ပြီး ဆယ်ကီလိုဆန်အိပ်ကို ရဲကားနောက်ခန်းတခါးကိုဖွင့်ပြီး မနိုင့်တနိုင်ကိုးရို့ကားယားနဲ့ မောင်မင်းကြီးသား ဆင်းလာတော့မှ ပေါက်ကျိုင်းတို့ တတွေ သက်ပြင်းမကြီး ဒုံးဒုံးချရသဗျ…၊ မလေးရှားရဲနှစ်ယောက်ကလဲ မောင်မင်းကြီးသား အိမ်ထဲဝင်ပြီးတဲ့အထိ ကြည့်ပြီး ပေါက်ကျိုင်းတို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောမလိုမလို့လုပ်တုန်း ဝူးကနဲ မောင်းထွက်သွားတာ စကမေး တောင် မလုပ်လိုက်ရဘူးခင်ဗျ..၊ သူ အိမ်ထဲချောချောမောမောရောက်မှ ပေါက်ကျိုင်းဦးလေးနှစ်ယောက် နဘန်နှစ်ချက်စီ ခွဲတမ်းချပြီး သမ ပါလေရောဗျို့.. ၊ ခွဲတမ်းချပြီးမှ ဦလေးနှစ်ယောက်က အကြိုးအကြောင်း မေးတော့ မလေးရှားကြွက်တောင် ကြောက်သွားရတဲ့ မောင်မင်းကြီးသား ဇတ်စုံခင်းပြရတာက ဒီလို ဒီလို……။။
သူ TESCO ကုန်တိုက်ကြီးမှာ ဆန်အိပ်ဝယ်ပြီးပြန်လာတော့ လမ်းမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံပါသတဲ့..၊ အဲဒီလို စကားတပြောပြောနဲ့ ဆန်အိပ်ထမ်းပြန်လာတုန်း ဗြုန်းဆို သူတို့ရဲ့ နဘေးမှာ ရဲကားတစ်စီး ထိုးရပ်လာတော့ ဘာစာရွက်စာတမ်းမှမရှိတဲ့ အိုဗာစတေး သူ့သူငယ်ချင်းက မပြောမဆို ပြေးပါလေရောတဲ့ ..၊ ထုံးစံ အတိုင်း အူကြောင်ကြား မောင်မင်းကြီးသားက မဆိမဆိုင် ဆန်အိပ်ကြီးကိုးရို့ကားယား နဲ့ လိုက်ပြေးတော့ ရဲကပိုမသင်္ကာဖြစ်ပြီး ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လိုက်ဖမ်းပါသတဲ့ဗျ..၊ အပြေးသန်တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း က လွတ်သွားပေမဲ့ မောင်မင်းကြီးသား ကိုယ် သုံးပုံတစ်ပုံလောက်လေးတဲ့ ဆန်အိပ်ကို ထမ်းပြေးနေရလေတော့ မိပါလေရော ..၊ ကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ဟိုစမ်းဒီစမ်း စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့စက်ရုံက ပေးထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြတော့ စစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပါသတဲ့ဗျာ ၊ ဒါပေမဲ့ ရဲကားက သူ့ကိုခေါ်တင်ပြီး ဟိုဝင်ဒီထွက်မောင်းတော့ ခမျှာ မျက်စိတွေလည်ပြီး မပြန်တတ်ဘူးလို့ မလေး စကား အီး စကားအကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ပြောတော့
ကိုရွှေရဲကလည်း တက်ဆီ နဲ့ပြန်လို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပြန် ပြော လမ်းဘေးတနေရာမှာရပ်ပြီး ဆင်းခိုင်းတော့ မောင်မင်းကြီးသားက စကား အကျိုးအပဲ့တွေကိုငပိသံနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ပေးဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဖမ်းမိတဲ့နေရာကို ပြန်ပို့ပေးဖို့ ပြောလဲပြော ကားပေါ်က မဆင်းဘဲ ဆန်အိပ်ကြီးကိုပိုက်ပြီး ကုတ်ကပ်တွယ်နေလေတော့ ရဲကဆွဲချ မောင်မင်းကြီးသားက ရုန်းနဲ့ မဟော်သဓာ သားလုတရား စီရင်ပုံအတိုင်း..၊ နောက်ဆုံး မျောက်ပိန် သာသာရှိတဲ့ သူ့ကို ကိုရွှေရဲတွေက တဖက်တချက်စီကိုင်တဲ့ပြီး လမ်းဘေးတနေရာမှာ ချ ထားခဲ့ပါသတဲ့ ..၊ ပေါက်ကျိုင်းတို့ အိမ်က စက်မူဇုံကြီးတွေထဲမှာရှိပါတယ် ..၊ စက်ရုံကြီးတွေကလဲ တခုနဲ့တခု ပုံစံတူ လူအရောက်အပေါက်ကလဲ နည်း ၊ ပါတဲ့ ပိုက်ဆံ ကလဲ ပြေးလွှားတုန်းက ဘယ်မှာ ကျကျန်ခဲ့သလဲမသိလေတော့ မောင်မင်းကြီးသားခမျှာ လမ်းဘေးမှာ ဆန်အိပ်ကြီးကိုချ ဖင်ခုထိုင် နဲနဲမှောင်လာပြီဆိုရင် လူသူရှိတတ်တယ်လို့ ထင်တဲ့ နေရာရှာရင်း လမ်းဘေးဆန်အိပ်ချ ပြန်ထိုင် ( ဒီမှာက သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်က အိုတီရှိရင် အနည်းဆုံးညရှစ်နာရီမှ အလုပ်သမားတွေ အိမ်ပြန်ကြလို့ လူသူရှင်းနေကြတာပါ ) လုပ်နေတုန်း ခုနက သူ့ကိုဖမ်းသွားတဲ့
ပတ္တရောင်ရဲကား တကြော့ပြန်တွေ့ပါသတဲ့..၊သူ့မလဲ အိမ်ပို့ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းမလို့ ဝမ်းသာအားရ လက်ပြပြီး ခေါ်မယ်လုပ်တော့ အစားကောင်းစားနေရင်း ခွေးချေးပုံ မြင်လိုက်ရတဲ့ မျက်နှာမျိုးတွေနဲ့ သူ့ကို ပြူးပြာ ကြည့်ပြီး ကား လီဗာ နင်းပြီး မောင်းပြေးသွားလိုက်တာ မီခိုးတဆုံးပါဘဲတဲ့ခင်ဗျ..၊ ဟယ် ထူးပါဘူး ဆိုပြီး စက်ရုံတစ်ရုံရှေ့ဝင်းတခါးမှာ ဆန်အိပ်ကြီးကိုချ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ဒီစက်ရုံက ကိုကိုရွှေတွေများ အလုပ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ အခါကျရင် အကူအညီလေးတောင်း ပြီး အိမ်ပြန်ပို့ခိုင်းမှဘဲလေ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မျောက်ထိုင် ထိုင်နေတုန်း ..ခွေးချေးပုံ အဲလေ.. ခုနက သူ နဲ့ ရှေးရေစက်ကြောင့်ထောမနာတင့်ခဲ့တဲ့ ပတ္တရောင်ရဲ ကားကသူ့ရှေ့မှာ တကြော့ပြန်ရပ်တဲ့ သူတို့အချင်းချင်းမလေးလို ပြောပြီး သူ့ကိုလက်ယပ်ခေါ် ကားတံခါးဖွင့်ပေးတော့ မောင်မင်းကြီးသား တောသားလူလည် ကြီး .. ခွေးဝဲစား မစင်ပုံ တွေ့သလို အူမြူးပြီး တက်လိုက်သွားလိုက်တာ ပင်မရဲစခန်းကြီးကိုရောက်ပါလေရော…၊ ပြီး ရုံးခန်းထဲက ဆက်တီ ဆိုဖာ ပေါ်မှာ ဆန်အိပ်ကြီးကို ခေါင်းအုံး ( အိမ်ပြန်လို့ ဒီဆန်အိပ်သာ ပြန်မပါလာရင် ဦးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မဟာ ပတ္တလား တီးသံ ကို သူ နားဆင်ရမှာ အမှန်ဧကန် ) မနက်ကျရင် သူ့အိမ်ကို ပြန်ပို့မှာဘဲလေ ဆိုတဲ့ အတွေး..မောမောနဲ့ အိပ်မောကျသွားလိုက်တာ ဆူဆူညံညံ အသံကြားလို့ လန့်နိုးပြီး ရုံးခန်းထဲက နံရံကပ်နာရီ ကို ကြည့်မိတော့ ညဆယ့်တစ်နာရီ ဒုတ်ဒုတ်မြည်ရောတဲ့ ..၊အဲဒီလို ဆူညံ
အသံတွေကြားရတော့ မောင်မင်းကြီးသားလဲ ဘေးဘီ ပြူးပြူးပျာပျာ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အထင် စခန်းမှူး ပခုံးမှာ ကြယ် သုံးပွင့်တပ်ထားတဲ့ အဘိုးကြီး တယောက်က ကိုရွှေရဲတွေကို တန်းစီခိုင်းထားပြီး ဟိန်းဟောက်ဆူဆဲ နေလိုက်တာ သူ့ကို လက်ညီုးတထိုးထိုး ဆိုဘဲ ခင်ဗျ..၊ သူ့ခမျှာ လဲ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့် နဲ့ ပြူးပြဲကြည့်နေတုန်း ဗြုံးဆို ဒီအဘိုးကြီးက သူ့ဆီရောက်လာပြီး E လို ပိုက်ဆံပျောက်လား ပစ္စည်းပျောက်လား ရန်လုပ်သေးလား လို့ မေးသတဲ့ဗျ..၊ ဒီမှာ တောသားမြို့တက်လူလည် ရဲ့ ညဏ်နီညဏ်နက်စပါပြီ ..၊ သူ.. မလေး ရောက်သက်ကလဲ ငါးလ နီးပါး ရှိပြီဆိုတော့ မလေး စကား အတိုအထွာ အကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ ပိုက်ဆံ ခြောက့်ဆယ့်သုံးကျပ် ဘယ်နားမှာ မသိကျပျောက်သွားကြောင်း ( အဲဒီမှာ စခန်းမူး အဘိုးကြီးက မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ တန်းစီ နေတဲ့ သူ့တပည့်တွေကို တချက်ကြည့်လိုက်ပြီ ) ပြီးတော့ မောင်မင်းကြီးသားက ဖမ်းတုန်းက ရွံ့ထဲ ဗွက်ထဲ ပြေးလွှား ချော်လဲ လို့ ကိုယ်လက်တွေနာနေကြောင်း ( အဘိုးကြီးက သူ့လူတွေကို မသင်္ကာအကြည့်နဲ့ ကြည့်နေပြီ ) နောက်ပြီး ကားအကြာကြီးစီးလာရတော့ အိမ်ပြန်လမ်း မသိတော့ကြောင်း ( အဘိုးကြီး သူ့လူတွေကို အံကြိတ် ပြီ ) ဒီဆန်အိပ်ကြီး အိမ်မရောက်လို့ အိမ်ကလူတွေ ထမင်းစားရဦးမယ် မထင်ကြောင်း ..နှပ်သသုတ်သုတ် နဲ့ မနှဲလေးနတ်သံနှောပြီး ငိုပြလိုက်တော့ ဒေါသအိုး စခန်းမူးအဘိုးကြီး
သူ့လူတွေကို ဆူဆဲဟိန်းဟောက်သံ က အဲဒီ ရုံးခန်းထဲမှာ ဝက်ဝက်ညံ သတဲ့ဗျို့ …၊ ပြီးတော့မှ အဘိုးကြီးက ထတဲ့ ပြီး တန်းစီနေတဲ့ သူ့တပည့်ကျော် အထီးအမ တွေဆီက တဦးကို ငါးကျပ်တန်သည် ငါးကျပ် ..ခြောက်ကျပ်တန်သည် ကောက်ခံပြီး ပိုက်ဆံ ခြောက်ဆယ့်သုံးကျပ် တိတိ ပြန်ပေးသတဲ့ခင်ဗျ.. ( သူအကြောက်လွန်ပြီး စကားမှားတာလား ညဏ်နီညဏ်နက်သုံးတာလားမသိ ကျပျောက်သွားတာက သုံးဆယ့်ခြောက်ကျပ် တိတိပါ လူလည်တောသား လုပ်ပုံ ) နောက်ပြီး သူ့ကိုဖမ်းတဲ့ ကိုရွှေရဲ နှစ်ယောက် ကိုလဲ သူ့ကိုမေးစမ်းပြီး အခုချက်ချင်း အိမ်အရောက်ပို့ခိုင်းသတဲ့ ဗျာတို့ …၊ အမှန်တော့ ကိုရွှေရဲ နှစ်ယောက်က မောင်းမင်းကြီးသားကို သနားလို့ ဒီမှာညအိပ်ခိုင်းပြီး မနက်မှ ပတ္တရောင်လှည့်ရင်း အိမ်ပြန်ပို့ဖို့ လုပ်ပြီးသားပါ…၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆရာ ဒေါသအိုးကြီးရဲ့ အမိန့်ကြောင့် သကာရည်လူးထားတဲ့မျက်နာတွေနဲ့ မောင်မင်းကြီးသား အဖမ်းခံရတဲ့ နေရာကို ကားမောင်းပြီး သူက တပည့်ကျော်ကိုရွှေရဲကို ဟိုဖက်ဒီဖက် လက်ညိူးထိုးပြီး နတ်လမ်းညွှန်လို့ ပေါက်ကျိုင်းတို့ အိမ်ကို ပြည်တော်ဝင်လာပါသတဲ့ ခင်ဗျား…..။
ပေါက်ကျိုင်းမလဲ ဒီတော့မှ သူဝယ်လာတဲ့ ဆန်ကို ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ထမင်းအိုးတစ်လုံး ကောက်ကဲ့ တည်ပြီး.. မောင်မင်းကြီးသားတောသားလူလည်ကို “ ဟဲ့ကောင်ရဲ့ မင်း ကလူကမာ ညဏ်နီညဏ်နက်တွေနဲ့ စခန်းမှူး အဘိုးကြီး ကို တိုင်တော့ မင့် ကိုရွှေရဲနှစ်ကောင်က ဒေါသမထွက်ဘူးလား “ လို့မေးတော့ သူက “ ဘယ်နှယ့်ပြောပါလိမ့် ကိုကြီးပေါက်ကျိုင်းရယ် သူတို့ခမျှာ ကျွန်တော့ကို ငါးကျပ်သားစီလောက်တုံး တုံးပြီး ခွေးကျွေးပလိုက်ချင်အောင် ဒေါသအမြှောင်းမြှောင်း ထွက်နေမှာ သူတို့ရဲ့အုံ့ပုန်းဒေါသကြီးကို ကျွန်တော် အိမ်ရောက်လို့ ကားပေါ်က ဆင်းမှ သေသေချာချာသိရတယ် “ ဆိုပြီး သူ့နောက်ကျောကို လှည်ပြတော့ နောက်ကျော အလည်တည့်တည့်မှာ ကိုရွှေရဲ ဆောင့်ကန်လိုက်တဲ့ ရွှံ့အလိမ်းလိမ်းနဲ့ ဖိနပ်ရာကြီး တွေ့တော့ ..မောင်ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေ ရယ်လိုက်ရတာ တသောသောနဲ့….။
မလေးရှားကို အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ ညီလေးဇေယျာ ရေ… ဒီက မီးတလက်လက်နဲ့ အဖြူရောင်ရဲကားကြီးကို ပေါက်ကျိုင်း တွေ့တွေ့ရတိုင်း အမှတ်ရမိပါတယ်..။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 1:16 AM
ပေါက်ကျိုင်း အထပ်ထပ်အခါခါ ကြည့် နှစ်သက်လှတဲ့ ဗွီဒီယို သီချင်းလေး များ..
နိုဗယ်ဆုကိုမှန်းနေတဲ့ ရွှေမြန်မာတိုင်းရင်းသား တစ်ဦးရဲ့ နည်းပညာ အောင်မြင်မူ တစ်ခု..
အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ရေနံနှင့်လောင်စာဆီရှားပါးမှုပြဿနာကို ကာကွယ်ရန် လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်နည်း ပညာသစ်ကို တီထွင် အောင်မြင် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယင်းနည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သော ဦးစိုင်းသန့်ဇင် ကဇန်န၀ါရီလ ၂၅ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
"ဒီနည်းပညာက ဘယ်သူမှ မတီထွင် နိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်ကြာအောင် ငွေကုန်ခံ၊လူပင်ပန်းခံ၊မိသားစုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးရှာဖွေတီထွင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသား
လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်နည်းပညာသစ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်အနည်းငယ်မှ လျှပ်စစ်များစွာကို ချဲ့ထွင်ပြီး ဘွိုင်လာ၊ တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာနှင့်တွဲဖက် အသုံးပြုကာ စွမ်းအားပမာဏ ကြီးမားစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သော
လျှပ်စစ်ထုတ်စက်ကို တီထွင်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ နည်းစနစ်အတွက် မည်သည့် လောင်စာမှ အသုံးပြုခြင်း မရှိပေ။
ဘွိုင်လာကို ဆူစေပြီး တာဘိုင်နှင့် တွဲကာဂျင်နရေတာတပ်လျှင် မီးစက် ဖြစ်သည်။ထိုဂျင်နရေတာကို ပန်ကာ တပ်လျှင် သဘောင်္ ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ထို့ကြောင့် ထိုစနစ်နှင့် လောင်စာမဲ့ သဘောင်္များ သွားလာနိုင်သည်။တစ်ချိန်က အသုံးပြုခဲ့သော မီးသဘောင်္များ အတိုင်း သွားလာ နိုင်သည်။လောင်စာမဲ့ ဆိုသည့်အတွက် ထိုသဘောင်္တွင် မည်သည့် လောင်စာကိုမှ တင်စရာ မလိုတော့သည့်အတွက် ၀န်အား သက်သာ သွားမည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး လုပ်ငန်းပိုမို အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ မီးရထားတွင်လည်း ကျောက်မီးသွေး စက်ခေါင်းကဲ့သို့ဘွိုင်လာစက်ခေါင်း အဖြစ်ပြန်တပ်ဆင် အသုံးချနိုင်သည်။
"လျှပ်စစ်မီးထွက်ဖို့ လောင်စာအနေနဲ့ ဘာလောင်စာဆီမှ မလိုပါဘူး။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ ဂက်စ်တွေ အသုံးပြုစရာ မလိုဘဲ ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာထဲကနေထွက်တာနဲ့လျှပ်စစ်တွေဟာ လိုချင်သလောက် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို
အခုထိတော့ နာမည် မပေးရသေးဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာလို့ ပေးထား ပါတယ်" ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ဆိုသည်။
ဦးကျော်ဝင်းသည် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်၃၀ ကျော်ချိန်ကတည်းက အဆိုပါနည်း ပညာကို စမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ကာ လိုအပ်သည့် အချက် လက်များကို ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းနေချိန် ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
"ဆရာနဲ့ကျွန်တော် စလက်တွဲတုန်းက ၁၉၉၃ခုနှစ်ကပါ။အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာမှာ တပည့်မရှိသေးပါဘူး။ ဆရာ အဲဒီစက်ကို တီထွင် နေတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သုံးနှစ်လောက်လေ့လာပြီးမှ ဆရာက သူ့အနားကပ် ခွင့်ပေးတာ။ အဲဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်ဟာဆရာ့ဆီက နည်းပညာတွေကို အကုန်မရခဲ့သေးပါဘူး။ ဆရာ့နည်း ပညာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်စားဖို့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ ဆရာ့ ပညာကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်မမီပါဘူး။ ဆရာဆုံးတော့ ဆရာ့ပညာကို အမွေဆက်ခံမယ့်လူမရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်အရဲစွန့်ပြီး လုပ်ခဲ့ တာ။ကျွန်တော် ထင်မထားပေမဲ့အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်" ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ပြောသည်။
"ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီမှာ လုပ်ကတည်းက ဆရာက နည်းပညာတွေ ပြောပြတယ်။ ကျွန်တော်က တပ်ဆင်ပေးရတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီနည်းစနစ်ရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကိုကျွန်တော် အကုန်သိ နားလည်တယ်။ ၀ှက်ဖဲတွေကိုလည်း သိလာတယ်။ ဆရာမရှိတော့ပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆင်လိုက်တာ လေးလုံးမြှောက်မှာမီးထွက်တယ်။ အဲ ၁၉၉၉ခုနှစ်ကတော့ လျှပ်စစ် မီးထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေက သူ့ဟာနဲ့ သူမဟုတ်တော့ မီးထွက်မမှန်ဘူး။ ဒါကိုနည်းပညာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး စမ်းသပ်တာရယ် ငွေမရှိတာတွေကြောင့် ပိုကြာသွားတာပါ" ဟု ရှင်းပြသည်။
"ဓနအင်အားပြည့်စုံတဲ့လူကသာ မတည်ရင်းနှီးငွေ ထည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်နည်းပညာသစ်ကို အခြေခံပြီး နောက်ထပ် နည်းပညာများ ထပ်မံပေါ်ထွန်းလာဦးမှာပါ" ဟု ၎င်း ကပြောသေးသည်။ဦးစိုင်းသန့်ဇင်သည် ကျိုင်းတုံ ဇာတိ ဖြစ်ပြီး အသက်၅၃နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက စက်မှုနည်းပညာ ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကားများ၏စက်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူပြုပြင်ခဲ့ရသည်။ကိုယ်ပိုင်ဂျစ်ကားများမှ ဂျစ်ဘီလူးအထိ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ယခင်က ကျောက်တွင်း ၄၅တွင်းနှင့် စိုက်ခင်း ဧက၂၀၀ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို အဆုံးရှုံးခံကာ ဤနည်းပညာကို ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ တို့ဖြင့် အနစ်နာခံ တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်သော နည်းပညာ(၅)မျိုးရှိသည့်အနက် ယခု လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော်တော် များများအသုံးပြုနေသော ရေဖိအားသုံး တာဘိုင်စက်များဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်ကုန်ကျ စရိတ် သက်သာ ထိရောက် သော်လည်းစတင်တည်ဆောက်ချိန်တွင် တည် ဆောက်စရိတ် အလွန်ကြီးမားသည်။
လောင်စာအတွက် အခက်ခဲမရှိ သော်လည်း ရေရင်းမြစ်ပေါကြွယ်ဝသည့် သဘာဝမြစ်၊ချောင်း၊ ရေတံခွန် များရှိနေရမည့်အပြင် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ရေမြေသဘာဝ ပထ၀ီအနေထား ကန့်သတ်ချက်များ၊ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မည့် နေရာနှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာ ကွာဝေးမှုကြောင့်တည်ဆောက်ထားသည့် နေရာနှင့် အနီးဝန်းကျင် မြို့များသာပိုမိုသုံးစွဲနိုင်သည်။
လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် သဘာဝဘေးဆိုးများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဆူညံမှုတို့ဘေးမှ ကင်းဝေးသည်။ယခုလောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်မှာ အဆိုပါ နည်းစနစ်များထက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာကာ မည်သည့်အားနည်းချက် မျှမရှိပေ။ ပေ ၁၀၀ ထ ၅၀ ရှိသည့် နေရာတွင်လျှပ်စစ်ထုတ်ကာ တစ်မြို့လုံးကို ၂၄နာရီ ပတ်လုံး မီးအလင်းပေးနိုင်သည်။
၁မဂ္ဂါဝပ်တွင်ဝပ်တစ်သန်းရှိ သည့်အတွက် ၀ပ်သန်းနှစ်ဆယ် ဆိုပါကမြို့လေးတစ်မြို့ကို မီးအလင်းပေး နိုင်သည်။အဆိုပါစက်မှာ ရှိရင်းစွဲပင်ရင်းမှ ထွက်လာသောအားကို ၁၀ဆပို ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၁၂ကီလိုဝပ် ရှိ မီးစက်အင်ဂျင်မှရှိရင်းစွဲလျှပ်စစ်ကို ယူပြီး ၁၀ဆပွားလိုက်လျှင် ကီလိုဝပ် ၁၂၀ ထွက်သည်။၀ပ်အားဖြင့် တွက်လျှင် ရှိရင်းစွဲ ၀ပ်၁၂,၀၀၀ကနေ ၀ပ် ၁၂၀,၀၀၀ ထွက်သည်။ထိုထဲမှ ၀ပ် ၅၀,၀၀၀ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြု နိုင်သည်။ယခုလက်ရှိ နမူနာတပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်မှာ Nichrome (နီကရုန်း)ကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ယင်းကြိုးများမှာ တစ်ကြိုးလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၃,၆၀၀မှ ၄,၈၀၀အတွင်း ထွက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ကြိုးမျိုး ၁၂ချောင်း ဆင်ထား သည်။ ထိုအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ကို 12KVရှိသည့် မီးစက်မှအားကို ဖန်တီးယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။
12KV မီးစက်ကိုနှိုးပြီး တီထွင်ထားသည့် နည်းပညာပုံးထဲမှ ဖြတ်ကာ ဘွိုင်လာ၏ လိုအပ်သည့် နီကရုန်း ကြိုးများဆီသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်သည်။ဥပမာ ဘွိုင်လာမှ နီကရုန်းကြိုး အချောင်း၁၀၀လိုလျှင် အချောင်း ၁၅၀ ဆင်ထားမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ချောင်း ပျက်လျှင် ထို၅၀ထဲမှ တစ်ချောင်းကို On လိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် စက်ကို ရပ်ဖို့ မလိုတော့ပေ။ဘွိုင်လာရှိ PSI ဘားက အရှိန် ၁၂၀ ရောက်မှ ယန္တရားလည်မည်ဆိုပါက ၁၂၀ လွှတ်ပြီး ၂၀၀နှင့်မှ ရုန်းပါက ၂၀၀လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဘားပွင့်မှသာ ရေနွေးငွေ့တာဘိုင်လည်မည်ဖြစ် ပြီး ဖိအားဖြင့် ဒလက်များလည်စေကာလျှပ်စစ်ထုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
"ပထမလျှပ်စစ်ပေးထားတဲ့ 12KV ကိုလည်း ယန္တရားကြီး လည်သွားတာ နဲ့အနားပေးလို့ရပါပြီ။ Recycle ပြန် သုံးတဲ့သဘောပါ"ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင် က ၄င်းလုပ်ငန်းခွင်ကို ရှင်းပြသည်။မူလပင်ရင်း ရှိရင်းစွဲမှ 12KV မှ ၀ပ် အား၁၂,၀၀၀သာ ရှိသည်။ ထို မီးစက် အင်ဂျင်မှ မူလ လျှပ်စစ်ကို ၀ပ်၁၀,၀၀၀ လောက်ယူပြီး ဖန်တီးထားသောစက်ထဲထည့်ကာ ဆင့်ပွားနည်းပညာဖြင့် ပြန်လည် ထုတ်လုပ်လိုက်သည့်အခါ မီးများမှာအဆိုပါ နီခရုန်း ကြိုး၁၂ ချောင်းမှ တစ်ချောင်းလျှင် ၀ပ် ၃,၆၀၀နှင့် ကြိုးပေါင်း ၁၂ချောင်း စုစုပေါင်း ၀ပ် ၄၃,၀၀၀အား ပြန်လည် ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
"မကြာခင်မှာ ကျွန်တော် စက်ရုံထောင်မယ်။ ဒီနည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာ့မူ ပိုင်ခွင့်ကို လှမ်းမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးပြုမယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော့် အခန်း ကဏ္ဍတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်တော့ နောင်လာနောင်သားတွေကိုဘဲ အားထားရတော့မှာပါ" ဟုဦးစိုင်းသန့်ဇင်ကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာမဂ္ဂါဝပ်၁,၅၀၀ရှိပြီး အနည်းဆုံး မဂ္ဂါဝပ် ၁,၂၀၀လောက်ရရှိလျှင် အဆင်ပြေ သည်ဟု သိရသည်။ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှန် တကယ်လျှပ်စစ်ရရှိမှုမှာ အနည်းဆုံး ၃၅၀မဂ္ဂါဝပ်မှ အများဆုံး ၅၈၀မဂ္ဂါဝပ် ထိသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးလိုအပ်သည့်မဂ္ဂါဝပ်ထက် အမှန်တကယ် သုံးစွဲမှုမှာ သုံးပုံ တစ်ပုံ သာရှိသည်။
လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် မြို့တစ်မြို့တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ လိုသည် ဆိုပါက ပေ၁၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိသည့် နေရာတွင် ၂မဂ္ဂါဝပ်ရှိသည့် စက်အလုံး၂၀တပ်ဆင်ထားပါက ၄၀မဂ္ဂါဝပ်ရရှိမည်။
သို့ဆိုလျှင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လို အပ်နေသည့် လျှပ်စစ်ကို ယခုကဲ့သို့ တီထွင် ဆပွားရင်း အသုံးပြုသွားမည် ဟုဆိုသည်။ယင်းနည်းပညာ၏ အောင်မြင်မှု အခြေအနေကိုမှ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာစိန်မြင့်တို့ အဖွဲ့က ဇန်န၀ါရီ လ၁၉ရက်နေ့တွင် လာရောက် လေ့လာပြီး နည်းပညာမှန်ကန်သဖြင့်
ဦးစိုင်းသန့်ဇင်နှင့် ပူးပေါင်းလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားသည်။
"ဒီပညာရှင် လောကမှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ လျှပ်စစ်မှာလော့စ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သီအိုရီ သဘော အရဆို သူ့ကိုဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရဘူး။ ဒါကလည်း သူတီထွင်ထားတာ အောင်မြင်ခဲ့လို့သာ။သူအခုချိန်မှာ ဒီလို လုပ်ချင်ပါ တယ်လို့ ပြောရင် သူ့ကို စိတ်မှ
ကောင်းသေးလားလို့ လူတွေ အထင်သေးကြမှာ အမှန်ဘဲ။ သူလည်းမအောင်မြင်တုန်းကတော့ ကြုံခဲ့မှာပါ။ အခုတော့ သူဒီနည်းပညာကိုအောင်မြင်သွားပြီ" ဟု တရုတ်ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ့ အိုင်တီလောက ဖွံ့ဖြိုးမှု.. မှ..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:13 AM
မောင်ပေါက်ကျိုင်း တယောက် ကမ္ဘာ့ကြွက်သိုက်ထဲဝင်မွှေရင်း အံ့သြောစရာ ရွံစရာ ကောင်းလှတဲ့ လင့်ကလေး တခု တွေ့မိပါတယ်..။ တရုပ်နိုင်ငံက ကလေးစွတ်ပြုတ်ပါတဲ့ ဗျာ ...ကောင်းမှကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာတို့ရေ လို့သာ ဟစ်ဟစ်ပြီး သာ အော်လိုက်ချင်ပါတယ်..။ လူတွေများ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဇတ်တူသားစားတဲ့ လူ့ဘီလူးကြီးတွေဖြစ်နေရတာလဲ..
ကဲ...ကလေးစွတ်ပြုတ် တဲ့ဗျာ..ဒီ ကလေး စွတ်ပြုတ် ကို SpareRib Souလို့ခေါ်ပါတယ်စားချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ပါဘူးတတဲ့ဗျာ..
ပိုက်ဆံယူပြီး ခလေးဖျက်ချမဲ့ စုံတွဲတွေရှိတဲ့အထိစောင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံကသတင်းထောက်တစ်ယောက်က ဆိုပါတယ်ခင်ဗျ..၊ အခုဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံCanton က စားသောက်ဆိုင် တခုမှာ အထူးအစားအစာ ဖြစ်နဲ့ ရရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။Spare Rib Soup ဆိုတာကတော့ ထိုကိုယ်ဝန်မှပျက်ကျထားတဲ့ ခလေးငယ်၊ ပြီးတော့ကြက်သား နှင့် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် အပင်များကို ရောပြီး ပြုတ်ထားတဲ့စွတ်ပြုတ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ အသက် ၆၂ အရွယ် တဏှာရူး တစ်ယောက်ဟာအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းခလေးကို ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ၊ထိုလူဟာ အဲ့ဒီခလေးစွတ်ပြုတ်ကို စားလို နေ့စဉ် လိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ SpareRib Soup ရဲ့ဈေးနှုန်း က တစ်ခွက်ကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂ဝဝဝ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဝဝ) ခန့်ရှိပြီး တခြားလူရုပ်လုံးမပေါ်သေးဘဲ ကိုယ်ဝန်ကပျက်ကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဆိုရင် တော့ ဒေါ်လာ ၃ဝ ခန့်လောက်နဲ့ ရနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်.
ဟူး .. ကိုရွှေတရုတ် တို့ ရေ.. ကိုယ့်အသား ကိုယ်လှီးပြီး ဆာတေး လုပ်စားပါလားဗျ .. ဒူလာ ကောင်းတယ် ဆိုဘဲ..
ကဲ ..အပေါင်းအသင်းတို့ ရေ ဘယ်လိုလဲ မှတ်ချက် တစ်ခုခုတော့ ပေးထားခဲ့ကြပါ.... ။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:14 AM
ပေါက်ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ကြွက်သိုက်ဆိုလို့ ပြောရပါဦးမယ်..ပေါက်ကျိုင်းခမျှာ ရေလျှံဖို့နေနေသာသာ ရှိတဲ့ရေတောင် နေ့စဉ် ခပ်သုံးနေရလို့ ရေအိုးအောက်ခြေက ရေခွက်ခြစ်ရာနဲ့ ပေါက်ခါနီးပါပြီ.. ခေတ်ချာတိတ်တွေ လိုပြောရမယ်ဆိုရင် ရေခန်းနေတဲ့ ခွန်နှစ်အိုရှစ်အို အန်းတိတ်ကြီးပေါ့ ခင်ဗျ..။
ကွန်ပြူတာ မော်နီတာ တင်ဖို့ စားပွဲလေးတစ်လုံးတောင် ဝယ်မနိုင်တဲ့ လဒူပေါက်ကျိုင်းခမျှာ ဒီနိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်တဒူဝ မြင်မကောင်းအောင်တွေ့မြင်နေရတဲ့ လမ်းကြိုလမ်းကြား ဟီးဟီးထနေတဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးတွေ ဆီက ခုံလေးတစ်လုံး ကို မ လာပြီး တူတစ်ချောင်းနဲ့ ဟိုထု ဒီရိုက် နဲ့ ကောက်တွယ်လိုက်တာ အပ်ချလောင်း ဆို ဟော.. ပိသုကာ ပညာရှင်များတောင် နည်းနာ ယူရလောက်တဲ့ ကွန်ပြူတာစင် ကြီး ဖြစ်သွားပါရောလား.. ပေါက်ကျိုင်းကြုံတုန်းပြောချင်ပါသေးတယ် ဒီက လမ်းဘေး အမှိုက်ပုံတွေ ဆီမှာ သုံးလို့ရသေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီးမို့ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး အားနဲတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းတို့လို လူမျိုးတွေ အတွက် ရွှေပုံကြီးပေါ့ ခင်ဗျ..( အခုမြင်ရတဲ့ မော်နီတာ ကလဲ အဲဒီ ရွှေပုံကြီး ထဲကနေ မ လာတာ ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့ ရှူး တိုးတိုး ) ပြီးတော့ အထဲက ကလီစာ တွေကလည်း ဟိုနားကောက် ဒီနားတောင်းနဲ့ စုပြုံ တပ်ပြီး ဝင်းဒိုး တင်လိုက်တော့ ဟော.. လဒူပေါက်ကျိုင်း တယောက် လက်ကမြင်းလို့ကောင်းတဲ့ အဖေ အယောက်၁၀၀ နဲ့ သာခွေယိုင် ကွန်ပြူတာ မွေးလာ.. အဲလေ ..ဖြစ်လာပါရောဗျို့..။
အဲဒီ မောင်ပေါက်ကျိုင်းချစ်တဲ့ အလံတစ်ရာသား မောင်ပေါက်ချစ်ကို ယုယုယယ နဲ့ ကျောကလေးသပ် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အကိုညီမောင် ညီမအမ တို့ကို တော်ကီလွတ်နေရသဗျာ..။ တစ်ခါတစ်ခါ များ ပေါက်ကျိုင်း သူ့ကို မနားတမ်း ခိုင်းမိပြီဆို ခမျှာ ဘုန်းဘုန်းလဲ ဆတ်ငင်ဆတ်ငင် ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ပေါက်ကျိုင်း ကြားဆရာသင်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ ကိုညီနေမင်း ကိုသံလုံငယ် ကိုကျော်စွာငြီမ်း တို့ ပြီး ကိုမုန်တိုင်း ကိုစေတနာ တို့ဆီ ပြေးရ အကူအညီတောင်းရ နဲ့ ဆရာသမားတွေ ခမျှာ ညဏ်ရည် နဲရှာတဲ့ မောင်ပေါက်ကျိုင်း ကို သူတို့ရဲ့ အနီးအနားမှာ ဆိုရင် တတောင်နဲ့တမျိုး ဖနှောက်နဲ့ တဖုံ လက်ပြန်နဲ့ တနည်း မေတ္တာ ထားအားပေးကြမယ်ဆိုတာ လဒူပေါက်ကျိုင်း သိသဗျ..ဒါကြောင့် ပေါက်ကျိုင်း တယောက် ဒင်းကလေး မောင်ပေါက်ချစ်ကို ချောင်းဆိုးရင်ကြပ် လေးတောင်မှမဖြစ်ရလေအောင် ပိုးမွေးသလိုမွေးပြီး ဂရုစိုက်နေရသဗျာတို့ရေ...။
ဆရာသမား တို့ရေ ဒီတခါဖြစ်ရင် ဆရာတို့ရဲ့ ဖနှောင့်စာ လွတ်အောင် လဒူပေါက်ကျိုင်း လေ့လာသင်ယူလျှက် ရှိပါကြောင်း ...ဟီး..
ပုံ .. လဒူပေါက်ကျိုင်း
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 4:11 AM
မောင်ပေါက်ကျိုင်းမလဲ အားအားလျားလျား အိမ်တကာ ပေါက်စေ့ ဝင်လည်နေမိတယ် ..သောက်လိုက်ကမ်းဆိုး မသိတဲ့ မောင်ပေါက်ကျိုင်းခမျှာ အိမ်ရှင်ကြိုက်လားမသိ မကြိုက်လား မသိ မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ မဟားဒယား ဝင်စား အတင်းဝင်နုတ်ဆက် အိမ်ရှင်ရဲ့ နံရံ တွေပေါ်မှာ ပေါက်ကျိုင်းအချစ်နံပါတ်တစ် ဂရင်းရျွိင်ရယ်လေး ဖြစ်တော့သည် တို့ ကဗျာလေးက ပေါက်ကျိုင်းရင်ထဲအသည်းထဲစူးနှစ်ဝင် မျက်ရည်တောက်တောက်ကျမိပါသည် တို့ အကို့ရဲ့ပို့စ်လေးကိုဖတ်မိပြီး ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေ ကိုသတိရ တမ်းတ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျမိသည် တို့ ( အမှန်တော့ ပေါက်ကျိုင်းမှာ ငယ်ရည်းစား ရှိဖို့နေနေသာသာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးကို ထုထုပြီး ပျိုပျိုမေ တို့ အားကိုးချင်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗေလုဝ ရုပ်မျိုး ဆိုတော့ သူသူငါငါ အတွဲတွေကို အားကျမနာလို ဖြစ်နေတဲ့ လူပျိုသိုးကြီးပေါက်ကျိုင်းပါ ) မစ္စတာ ဂစ်တာ ကော်ဖီရှော့ မှာလို မဟားဒယား လျှောက်ရေး.. မျက်နှာက ဘုရားတကာ ကျောင်းတကာ .. လက်က ဝက်မြီး လို့ အပေါင်းအသင်းတွေက ထောမနာ ပြုထားတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ထူးကြီးနဲ့ အညီ အိမ်ရှင်အလစ်မှာ ဟိုဟာဆွဲ ဒီဟာမ နဲ့ ဒီလိုပေါက်ကျိုင်း လက်သရမ်း တတ်သေးသဗျ...။
မနေ့ကတောင် ဟာဒယစာလေးတွေ ရေးသား ပေါက်ကျိုင်း လေးစားရတဲ့ ကိုပီတာ ကိုဒူကဘာ ကိုကျောက် တို့ဆီ ဝင်လည် အသော လေးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ စာတွေဖတ် ပြီး ကိုကျောက် စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ယိုးဒယား ဒညှင်းသီးစားစိမ်လေး ၃လုံးကို အိမ်ပြန် ငပိရည်လေး စမ်းပြီး ဆွဲရအောင်လို့ အလစ်သုတ် ခဲ့သေး..အဟေး ဟေး..။
ပေါက်ကျိုင်း ရုပ်ကသာ ဗေလုဝ တောင် ကြောက်ငိုငို ရပေမဲ့ ဟိုး ဟောင်ကောင် ကနေ ဟောလီးဝုဒ် ကိုရောက်သွားတဲ့ စူပါအက်ရှင်မင်းသား ရှောင်ယွန်ဖတ် ( စာလုံးပေါင်းမှားရင်ခွင့်လွတ်ပါ ခင်ဗျ ) ကို အလွန်အားကျမိတယ် .. သူ့ရဲ့ ကောင်းလှတဲ့ ဥပဓိ ရုပ်နဲ့ ပေါက်ကျိုင်း နဲ့ က နှံ့သာဆီ နဲ့ ချေးတုန်း လို ကွာပေမဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် ရှောင်ယွန်ဖတ် လို ဖြစ်ချင်သေးသဗျား...။
လဒူပေါက်ကျိုင်း သာ ရုပ်ရှင်ဝင်ရိုက် ရမယ်ဆိုရင် နာမည်လှလှကောင်းကောင်း လေး ပေးဦးမှ.. ပေါက်ကျိုင်းဖတ်.. ပေါက်ပေါက်ဖတ်.. ဘယ့်နှာ ...ဟုတ်သေးပါဘူး ..ရှောင်ယွန်ပေါက် ..ရှောင်ယွန်ကျိုင်း .ဟုတ်ပြီ ..ရှောင်ယွန်ပေါက်..ရှောင်ယွန်ပေါက် .ဒီနာမည် နဲ့ ဇတ်ကားတွေရိုက် နာမည်ကျော် ဟောလီးဝုဒ်ဒါရိုက်တာတွေ က ကားရိုက် ရက်ချိတ်ထားတာလဲ အပြည့် ငဝိုင်းတွေ တထောကြီးရ ဟုတ်နေတာ...။ ရှောင်ယွန်ပေါက် တစ်ယောက် အသက်တွေ ကြီးလာပြီဆိုရင် ရုပ်ရှင်လောက က လုံးဝ အနားယူ မီယာမီကမ်းခြေမှာ အိမ်ကြီးတစ်လုံးဝယ် တပည့်မလေးတွေဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝဲကျော် ..အေးမြတ်ဗြဲလရမ်း တို့ စိုးဝက်သဇင် တို့ အိုအူဝဲ လေးတို့ကို ပေါက်ကျိုင်း နေ့စဉ် ပရဟိတအလုပ်တွေ ကူဖို့ တရားထိုင်လို့ကောင်းဖို့ လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းဖို့ ခေါ်ထားဦးမှ ..။
ထမင်းချက် အိမ်သန့်ရှင်းရေး အနှိပ်အနယ် ကို သူတို့လေးတွေ အလှည့်ကျ လုပ်ပလေ့စေပေါ့ ..
" ဟဲ့ သင်ဇာ လေး လေးလေးပေါက် ဇက်ကြောတွေ တက်နေလို့ လာ နှိပ်ပေးပါဦးဟ " " ဟဲ့ စိုးဝက် ကလေးရဲ့ လေးလေးပေါက် တရားထိုင်ရလို့ ခြေတလုံးတွေ တင်းနေတာ တတောင်လေးနဲ့ လာတွတ်ပေးပါဦးကွဲ့ " .. " သင်ဇာ ..ကလေးရဲ့ လက်က မပေါက်ဘူး တတောင်နဲ့ နာနာဖိ..အင်းအင်း ဟုတ်ပြီ အောက်ကိုဖြေးဖြေးခြင်း ဆင်းသွား အဲ...ဟုတ်ပြီ ကျွတ် ကျွတ် ကောင်းသဟေ့ ..
အားလားလား သင်ဇာ ဘယ်နှာလုပ်လိုက်တာလဲ ဖွဖွလေး ဖိမှပေါ့ ..တကယ်တည်း ဝက်သတ်တာကြနေတာဘဲ ....နာလိုက်တာ ဘယ်လိုများထောင်း..... ကလေးမတော့ နာချင်ပြီနဲ့ တူတယ် ....ဖုန်း...အောင်မယ်လေး လေး....ခါးတော့ကျိုးပါပြီ.. ဒီကောင်မလေး ဘယ်လို တွတ်နေလဲလို့
ပေါက်ကျိုင်း မှောက်ခုံကနေ ပက်လက်ကြည့်လိုက်တော့ လားလား...သင်ဇာဝက်ကျော် မျက်နှာ က ဘယ့်နှာ နုတ်ခမ်းမွှေး ကျိုးတို့ကျဲတဲ နဲ့ ဆယ်ပြားစေ့မျက်နှာကြီး ပေါက်ကျိုင်းကို စားတော့ဝါးတော့ မလိုကြည့်နေတော့တာ. .သင်ဇာလေးက ဘယ် ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့ ပြူးပြူးပြာပြာ ဘေးဘီ ကြည့်ပြီး သင်...သင်ဇာလေး..
" ဘာ သင်ဇာ လေးလဲ .. သေချင်လို့လား အပေါ်က ပန်ကာ ကို ဂိတ်ဆုံး တင်ပြီး အောက်က ကျောက်ပြား အခင်းပေါ်မှာ ဘာလို့မှောက်ခုံကြီး အိပ်နေရတာလဲ လေဖြတ်ပြီး သေချင်းဆိုးနဲ့ သေချင်လို့လား "မင်းသေတာ အရေးမကြီးဘူး ငတို့ အလုပ်ရှုပ်တယ် ပိုက်ဆံ သောက်သောက်လဲကုန်တယ် လို့ ငေါက်ငန်း နေတာ ဘယ်သူလဲလို့ မျက်စေ့ကိုအတင်းကုန်းရုံးပြီး ပွတ်ကြည့်လိုက်တော့ ပေါက်ကျိုင်း အဖေလို ဦးလေးလို ချစ်ရတဲ့ အိမ်ရှင် ဆယ်ပြားစေ့ မျက်နှာနဲ့ ဦးဖထီး ကြီး..
" ဘယ့်နဲ့ကွာ ကြုံ ကြုံဘူးပေါင် မှောက်လျှက်ကားယားကြီး အိပ်နေပြီး ဟောက်နေလိုက်တာများ ဧည့်ခန်းထဲမှာ လှိုင်သံ တောင် ထွက်နေတယ် ..ဟေ့ သေချင်းဆိုး မျက်နှာမှာလဲ သွားရည်တွေ ဗလပွ နဲ့ ဝက်မျက်နှာ ဆီသုတ်ထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်ထဲသွားကြည့်ဦး ..။
သင်ဇာ လေး ဘယ် ဘယ်ဆီသွား...
ဘာသင်ဇာလေးလဲ ငါထပ်ပြီး ထုပလိုက်ဦးမယ် အိပ်မက် ကယောင်ခြောက်ခြားနဲ့ သွား ကိုယ့်အခန်းထဲ ကိုယ် စက်တော်ခေါ် .. ဟုတ်ပါပြီ ရှောင်ယွန်ပေါက် ..အဲလေ..ပေါက်ကျိုင်း အိပ်မက် မက်နေတာ ကိုး
လို့တွေးမိပြီး အတင်းကုန်းရုံးထ ဖင်တဝက်လျှောကျနေတဲ့ သားရေကြိုးလျှော့ ဘောင်းဘီ ကို မတင် လဒူပေါက်ကျိုင်း စက်တော်ခေါ်ရာ ကြွက်သိုက် အခန်းဆီသို့ အိပ်ချင်မူးတူး အူယားဖါးယား ပြေးဝင်သွားလေတော့သတည်း.....။
" ဟဲ့ သင်ဇာဝက်ကျော် တို့ မနက်ဖန်လဲ လာခဲ့ဦးကြားလား ..ဘာရယ် ရတနာပြားနဲ့ ဇူးဇူးပေါက် တို့လဲ လာချင်တယ် ဟတ်လား..အိမ်းအိမ်း ခေါ်ခဲ့ အလှည့်ကျ ပြုစု လေ့ပစေပေါ့ကွယ် ..ဟဲ့ ဒီနားတိုးစမ်း တိုးတိုးမှာရဦးမယ်.. ဟို နေ့တိုင်း လိုးရှင်း အလိမ်းများတဲ့ ကောင်မလေးကိုတော့ မခေါ်ခဲ့နဲ့ ကြားလား တော်ကြာ ရှောင်ယွန်ပေါက် ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သူ လိုးရှင်း အလူးများတာနဲ့ မွဲလိမ့်မယ်..ကောက်ချင်ကောက် ပလေ့စေပေါ့ ကွယ် တတ်နိုင်ဘူး..."
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 11:16 PM